Zaw Hein, Author at Shwe Khit - Page2of 413
ကြားအင်ျဂါ ကို မလုပျသငျ့ သညျ့ အ ရာ မြား
October 24, 2021 by Zaw Hein
ပါသော ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးတဈခုကို မလုပျသငျ့၊မလုပျအပျတဲ့အရာတှအေကွောငျး ရှောငျရနျ ကိုတိုးတိုး တိတျတိတျလေးပွောပွပေးသှားပါ့မယျ မှတျခကျြ
မိနျးကလေးမြား မဖတျရပါ ဖတျ ခငျြလဲဖတျပါ၊ပွီးမှ မရှကျပါနှငျ့
၁။ လကျဖွငျ့ပုတျခွငျး၊ရိုကျခွငျးမပွုရပါ။လထေိုး၍ရသောလကျဝှအေိ့တျမဟုတျပါ၊ကြီစယျ၍သျောလညျးကောငျး၊ရညျရှယျခကျြရှိရှိသျောလညျးကောငျး ရိုကျပုတျခွငျး
၂။ ဖိခွငျး၊ညှဈခွငျးမြားလဲမလုပျသငျ့ပါ။ ၎င်းငျးသညျ အလှနျနူးညံ့သောကွောငျ့ pressure ဒဏျကို မခံနိုငျပါ
၄။ သားရကှေငျးမဟုတျပါ။အလှနျအမငျး ဆှဲဆနျ့ခွငျး လုံးဝမပွုလုပျရပါ
၅။ ဝှေးစမြေ့ားအား ရနှေေးပူဖွငျ့ ဆေးကွောသနျ့စငျခွငျးမလုပျရပါ ကွကျဥမဟုတျသောကွောငျ့ ရနှေေးဖွငျ့စိမျပွုတျရနျမလိုအပျပါ
၆။ မီးဖိုခြောငျအိမျသုံး သနျ့စငျဆေးရညျမြားဖွငျ့ ဆေးကွောစရာမလိုပါ ၎င်းငျးတို့သညျ အန်တရာယျဖွဈစတေတျပါသညျ။ဘယျလောကျပဲညဈပတျပရေနေပေါစေ ဆပျပွာ
၇။ အလှနျအမငျးပှတျတိုကျခွငျးမပွုရပါ အလှနျအမငျးပှတျတိုကျခွငျးသညျ ပူစပျနာကငျြခွငျးကိုခံစားစရေရုံမက အရပွေားပှနျးပဲ့၍အနာပါ ဖွဈနိုငျပါတယျ
၈။ စိတျပါနခြေိနျ မခြိုးရပါ လကျဖွငျ့ကှေးညှတျရသော စပရိနျအလေးခြောငျးမဟုတျပါ၊မာကွောနခြေိနျ ၃ဝဒီဂရီထကျ ပိုမခြိုးသငျ့ပါ မခြိုးလြှငျ အကောငျးဆုံးဖွဈ
၉။ မကိုကျရပါ မိမိဖာသာ ငုံ့ကိုကျ၍ကားမရပါ၊ ထို့ကွောငျ့ ကိုကျနိုငျမညျ့သူကို လုံးဝမကိုကျပါနှငျ့ဟု ကွိုတငျသတိပေးထားပါ
၁၀။ ကွညျ့မိသမြှ ရုပျရှငျမြားကို စိတျပါလကျပါလိုကျမခံစားပါနှငျ့ ရုပျရှငျထဲမွငျမွငျသမြှ မှနျးမြှျောနလြှေငျ လိုအပျသညျထကျပိုသော ဆန်ဒဖွခွေငျးဖွဈ၍ ဒုက်ခရောကျ
၁၁။ နံရံပလပျပေါကျမြားသညျ မီးပလပျထိုးရနျအတှကျသာဖွဈပါသညျ၊သငျတို့အတှကျမဟုတျပါ မရယျပါနှငျ့၊အခြို့သော အမြိုးကောငျးသားမြားသညျ ဝါးလှညျး
တောငျဖွတျမမောငျးရဲ လောကျအောငျဖွဈသညျ တှကေ့ရာစမျးစမျး စမျးစမျးနဲ့ လြှောကျမထိုးပါနှငျ့ ဓါတျလိုကျ၍သတေတျပါသညျ၊လြှပျစဈမီးသညျ ဆော့စရာမဟုတျ
၁၂။ ဒုံးကညျြထိပျဖူးအား လိုအပျသညျထကျပို၍ သနျ့ရှငျးရေးမပွုလုပျရပါ၊ရောငျယမျးပှနျးပဲ့ခွငျး၊အနာဖွဈခွငျး ဖွဈနိုငျသညျ
၁၃။ မှေးကငျးစကလေးအနှီးထုပျသလို ကပျြညပျနအေောငျမထုပျထားရပါ မိမိနှငျ့ Fitဖွဈသောအတှငျးခံကိုရှေးခယျြတတျပါစေ
၁၄။ မတနျတဆ၊ကပျြညပျနရောတှငျ အတငျးတိုးမဝငျပါနှငျ့ ဒဏျရာအနာတရဖွဈခွငျး၊ကူးစကျရောဂါပိုးဝငျခွငျး ဖွဈနိုငျပါတယျ
၁၅။ ကိုယျနှငျ့ထိုကျတနျသော အရှယျအစားကိုသဘာဝမှပေးထားပွီးဖွဈပါတယျ။မတျောမရျောကွီးခငျြစိတျကိုထိနျးပါ၊ ထိုသို့ကွီးအောငျ ဆေးလိမျး ဆေးထိုးခွငျးမြား
၁၆။ စိုကျခငျးမဟုတျပါ၊အမွဲရိတျသိမျးဖို့ ကွိုးစားမနပေါနှငျ့ အမှေးအမှငျမြားသညျ သဘာဝအတိုငျးပေးထားသော အကာအကှယျဖွဈပါသညျ၊ရိတျခငျြသပဆိုပါကလဲ
ဓါးသှားအသနျ့ဖွငျ့ ထိခိုကျပွတျရှမှုမရှိအောငျ ရိတျပါ ဤတှငျ တနျဖိုးကွီးသော ရတနာသိုကျအား မပွုလုပျသငျ့သညျ့အရာမြား
တဈခနျးရပျပါပွီ အားလုံးပဲ ရတနာသိုကျကွီးအား လုံခွုံဘေးကငျးစှာ
စောငျ့ရှောကျနိုငျကွပါစေ။ credit Dr Ye Lwin
ပါသော ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို မလုပ်သင့်၊မလုပ်အပ်တဲ့အရာတွေအကြောင်း ရှောင်ရန် ကိုတိုးတိုး တိတ်တိတ်လေးပြောပြပေးသွားပါ့မယ် မှတ်ချက်
မိန်းကလေးများ မဖတ်ရပါ ဖတ် ချင်လဲဖတ်ပါ၊ပြီးမှ မရှက်ပါနှင့်
၁။ လက်ဖြင့်ပုတ်ခြင်း၊ရိုက်ခြင်းမပြုရပါ။လေထိုး၍ရသောလက်ဝှေ့အိတ်မဟုတ်ပါ၊ကျီစယ်၍သော်လည်းကောင်း၊ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသော်လည်းကောင်း ရိုက်ပုတ်ခြင်း
၂။ ဖိခြင်း၊ညှစ်ခြင်းများလဲမလုပ်သင့်ပါ။ ၎င်းသည် အလွန်နူးညံ့သောကြောင့် pressure ဒဏ်ကို မခံနိုင်ပါ
၄။ သားရေကွင်းမဟုတ်ပါ။အလွန်အမင်း ဆွဲဆန့်ခြင်း လုံးဝမပြုလုပ်ရပါ
၅။ ဝှေးစေ့များအား ရေနွေးပူဖြင့် ဆေးကြောသန့်စင်ခြင်းမလုပ်ရပါ ကြက်ဥမဟုတ်သောကြောင့် ရေနွေးဖြင့်စိမ်ပြုတ်ရန်မလိုအပ်ပါ
၆။ မီးဖိုချောင်အိမ်သုံး သန့်စင်ဆေးရည်များဖြင့် ဆေးကြောစရာမလိုပါ ၎င်းတို့သည် အန္တရာယ်ဖြစ်စေတတ်ပါသည်။ဘယ်လောက်ပဲညစ်ပတ်ပေရေနေပါစေ ဆပ်ပြာ
၇။ အလွန်အမင်းပွတ်တိုက်ခြင်းမပြုရပါ အလွန်အမင်းပွတ်တိုက်ခြင်းသည် ပူစပ်နာကျင်ခြင်းကိုခံစားစေရရုံမက အရေပြားပွန်းပဲ့၍အနာပါ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
၈။ စိတ်ပါနေချိန် မချိုးရပါ လက်ဖြင့်ကွေးညွတ်ရသော စပရိန်အလေးချောင်းမဟုတ်ပါ၊မာကြောနေချိန် ၃ဝဒီဂရီထက် ပိုမချိုးသင့်ပါ မချိုးလျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်
၉။ မကိုက်ရပါ မိမိဖာသာ ငုံ့ကိုက်၍ကားမရပါ၊ ထို့ကြောင့် ကိုက်နိုင်မည့်သူကို လုံးဝမကိုက်ပါနှင့်ဟု ကြိုတင်သတိပေးထားပါ
၁၀။ ကြည့်မိသမျှ ရုပ်ရှင်များကို စိတ်ပါလက်ပါလိုက်မခံစားပါနှင့် ရုပ်ရှင်ထဲမြင်မြင်သမျှ မှန်းမျှော်နေလျှင် လိုအပ်သည်ထက်ပိုသော ဆန္ဒဖြေခြင်းဖြစ်၍ ဒုက္ခရောက်
၁၁။ နံရံပလပ်ပေါက်များသည် မီးပလပ်ထိုးရန်အတွက်သာဖြစ်ပါသည်၊သင်တို့အတွက်မဟုတ်ပါ မရယ်ပါနှင့်၊အချို့သော အမျိုးကောင်းသားများသည် ဝါးလှည်း
တောင်ဖြတ်မမောင်းရဲ လောက်အောင်ဖြစ်သည် တွေ့ကရာစမ်းစမ်း စမ်းစမ်းနဲ့ လျှောက်မထိုးပါနှင့် ဓါတ်လိုက်၍သေတတ်ပါသည်၊လျှပ်စစ်မီးသည် ဆော့စရာမဟုတ်
၁၂။ ဒုံးကျည်ထိပ်ဖူးအား လိုအပ်သည်ထက်ပို၍ သန့်ရှင်းရေးမပြုလုပ်ရပါ၊ရောင်ယမ်းပွန်းပဲ့ခြင်း၊အနာဖြစ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်
၁၃။ မွေးကင်းစကလေးအနှီးထုပ်သလို ကျပ်ညပ်နေအောင်မထုပ်ထားရပါ မိမိနှင့် Fitဖြစ်သောအတွင်းခံကိုရွေးချယ်တတ်ပါစေ
၁၄။ မတန်တဆ၊ကျပ်ညပ်နေရာတွင် အတင်းတိုးမဝင်ပါနှင့် ဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်ခြင်း၊ကူးစက်ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
၁၅။ ကိုယ်နှင့်ထိုက်တန်သော အရွယ်အစားကိုသဘာဝမှပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။မတော်မရော်ကြီးချင်စိတ်ကိုထိန်းပါ၊ ထိုသို့ကြီးအောင် ဆေးလိမ်း ဆေးထိုးခြင်းများ
၁၆။ စိုက်ခင်းမဟုတ်ပါ၊အမြဲရိတ်သိမ်းဖို့ ကြိုးစားမနေပါနှင့် အမွှေးအမှင်များသည် သဘာဝအတိုင်းပေးထားသော အကာအကွယ်ဖြစ်ပါသည်၊ရိတ်ချင်သပဆိုပါကလဲ
ဓါးသွားအသန့်ဖြင့် ထိခိုက်ပြတ်ရှမှုမရှိအောင် ရိတ်ပါ ဤတွင် တန်ဖိုးကြီးသော ရတနာသိုက်အား မပြုလုပ်သင့်သည့်အရာများ
တစ်ခန်းရပ်ပါပြီ အားလုံးပဲ ရတနာသိုက်ကြီးအား လုံခြုံဘေးကင်းစွာ
စောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေ။ credit Dr Ye Lwin
ကမြ ရောငျးတဲ့ လှိမျ့ဝငျ တညျသုံး အဆောငျအကွောငျး ဗဟုသုတအဖွဈ ဖျောပွလိုကျပါတယျ။တဈနိုငျငံလုံးစိတျဝငျ စားနကွေတဲ့ လှိမျ့ဝငျတညျသုံးယတွာက ကြှနျတျောစ ခဲ့တဲ့ ဇာတျလမျးပါ ။ အဖွဈက ဒီလိုပါ ။
၁။ မိတျဆှတေဈယောကျနဲ့ ၂နှဈခှဲနမှေ ပွနျတှတေ့ော့ သူ့မိသားစုကတျောတျောလေး အဆငျပွနေပွေီးအရငျ ထရံအိ မျလေးနရောမှာ အာစီတဈထပျတိုကျကွီးနဲ့ပေါ့ အရမျးကိုအဆငျပွပွေီး နောကျထပျတိုကျတဈလုံးတောငျ ဆောကျနတေယျလို့ ပွောပါတယျ။
သူ့လုပျငနျးက တအားလှိမျ့ဝငျသှားတာကို အဲ့ သူ့အိမျရှအေ့ဝငျဝမှာ လှိမျ့ဝငျ စဉျ့အရုပျလေးကို အိမျဘကျ လှိမျ့ဝငျနတေဲ့ ပုံခြိတျထားတာတှရေ့ပါတယျအိမျဧညျ့ခနျးမှာတော့ စဉျ့အိုးလေး တညျနတေဲ့ပုံကို တငျထားတာတှရေ့ပါတယျမေးကွညျ့တော့ လှိမျ့ ဝငျ တညျ သုံးလတေဲ့ စီးပှားဖွဈတယျ လုပျငနျးကောငျးတယျတဲ့ဗြာ
၂။ ကြှနျတျောတို့ မွို့မှာ ထမငျးဆိုငျတဈဆိုငျ ရှိတယျ အရမျးကိုရောငျးရတယျအလှူပေးနသေလိုကိုရော ငျးရတာ သူတို့အိမျမှာလညျး အိမျရှသေံ့တံခါး အုတျခုံမှာအဲဒီ လှိမျ့ဝငျ အရုပျလေး အိမျဘကျကို လှိမျ့ဝငျနတေဲ့ ပုံလေး တငျ ထားတာတှရေ့ပါတယျ
၃။ အဲဒါနဲ့ လူမဝငျ လုပျငနျးမကောငျးတဲ့ သူနဲ့ အကွှေးတငျနတေဲ့မိတျဆှေ တဈယောကျ နှဈယောကျကိုအဲဒီအရုပျလေး နှဈခုကို ထားဖို့ ပွောလိုကျတာ သူတို့လညျး ကြောကျဆညျ တပေါငျးပှဲနဲ့ကွုံတော့စဉျ့ကူးက စဉျအိုးသညျတှေ လာတာနဲ့ အဲဒီ အရုပျလေးကို တဈရုပျကို အိမျရှမှောထားပွီး
တဈရုပျကို အိမျထဲမှာထားဖို့ ပွောလိုကျတာ အဲဒီ ၃ယောကျဟာ ၆လအတှငျး လုံးဝ မဆပျနိုငျတော့ဘူးလို့ထငျထားတဲ့ အကွှေးတှေ ကွပွေီး အဆငျပွေ သူတှဖွေဈနေ ပါပွီဗြာ
အဲဒါနဲ့ ပွငျဦးလှငျက ဗဒေငျ ဆရာ ဆရာဝငျးမျောအောငျ အိမျလာတော့ အဲဒီ ယတွာအကွောငျးပွောပွလိုကျတာသူလညျး သဘောကပြွီး အဲဒါကို အားလုံး သိအောငျ ဖဘှေ့တျပျေါတငျပေးပါလို့ ပွောလို့ တငျပေးရာကနလှေိမျ့ဝငျတညျသုံး အိုးသညျတှေ ရောငျးမလောကျ ဖွဈကုနျတော့ တာပါပဲ ဗြာ ။
လှိမျ့ဝငျ တညျသုံး စဉျ့အိုးလေးတှေ ဘယျလို ဓာတျဆငျရတာပါလဲ အဲဒီလှိမျ့ဝငျ တညျသုံး အရုပျလေးတှကေဟိုအရငျ လောကီပညာရှငျ (ဆနျးပညာရှငျ) တှေ လုပျသှားခဲ့တာပါ ။
ပညှပျသှားရာ ဓါတျသကျပါ ဆိုသလို လူအမြား သုံးစကား လှိမျ့ဝငျ ဆိုတာကို ယူပွီး လှိမျ့ဝငျ နတေဲ့ အရုပျကလေး တှေ ကို စီရငျပေးသှားတာပါ ။
အဲဒီမှာ စဉျ့အိုး လေး ကို လှိမျ့ဝငျနတေဲ့ ကောငျလေး( ၂ ၄ ) ပုံလေးပါ ။စဉျ့အိုးကို ဘာလို့သုံးလဲ . တဈခွားဟာတဈ ခု ခုကိုလညျး လှိမျ့ဝငျလို့ ရတာပဲလို့ တှေးမိတော့ စဉျ့အိုး = ၃ ၁ ဆိုတာ အောငျစေ = အေးစေ = ၁ ၃ ကို ကကျက ငျးရိုကျသှားတယျ ထငျပါ တယျ ။
လှိမျ့ဝငျ = ၄ ၄ = ရှလော = လူလာ = လိုရာ = ရလာ ဓါတျပေါ့..လှိမျ့ဝငျ ပွီးတော့ဘာလုပျမလဲ ဆိုတော့တညျသုံးလေ တဈရုပျလုပျသှားပါတယျ။လှိမျ့ဝငျလာတဲ့ဟာတှကေို ဘုရားတညျ ၊ကြာငျးတညျ ၊ဇရပျ တညျ ။
သာသနာ တညျနိုငျတဲ့အထိ သုံးနိုငျဖို့ လောကီဝိဇ်ဇာ အဘမြားက စီရငျ သှားခဲ့တဲ့ ဓါတျအရုပျလေးတှပေါ ။
ဘယျလို သုံးမလဲ ၊ ဘယျလို ဆော ငျမလဲ ဗြာ
၁။ သန ခြေ ရပါတယျ။ အညံ့ခွရေပါတယျ
ကိုယျ့စီးပှားအတှကျ အထှဋျ အမွတျဆောငျမညျ့ ပစ်စညျးဟာ ကားနဲ့သယျလားရငျ အမြိုးသား အမြိုးသမီး ကလေး လူကွီး ကြျောခှသှားတာမြိုး ၊ကားထိုငျခံအောကျထဲထညျ့ သယျလာတာမြိုး တှရှေိတတျပါတယျ။
အဲဒီလို အညံ့ဓါတျတှေ ကငျးဖို့ ဆားရညျ (ရေ ၁ ဂါလံ ကို ဆား ၂ ဇှနျးထညျ့ပွီး)ကို ဇလုံထဲထညျ့ပွီးလကျဆယျ ခြောငျးက ဆေးဖွဈစေ ဆိုပွီး ၃ခါ ပွောပွီး လကျနှဈဖကျကို ဇလုံထဲထညျ့ပွီးသနပျခါး သှေးသလို လကျယာရဈ မှပွေီး ပါးစပျ မှလညျး ဥုမျ သန သန သန အပေါငျး ထောငျသောငျး ကွစေရာ ကွေ ဆိုပွီး၃၇ ခေါကျ ရှတျပွီး မှ အဲဒီ အရုပျ မြားကို ၎င်းငျးရနေဲ့ ဆေးပါ ။
ပွီးမှ ၎င်းငျး အရုပျမြားကို ရမှေေး (နဝငျးရေ) ရညျနဲ့ ပကျဖွနျးပွီးမှာ အိမျဘကျသို့ အိုးလှိမျ့ ဝငျနတေဲ့ပုံအိုးကို အိမျဘကျ အတှငျးသို့ ထားပွီး အိမျရှမှေ့ာ ထားလိုကျပါ ။တညျသုံးအိုး လေးကိုတော့ အလုပျစားပှဲ ၊ အိပျခနျးစားပှဲ ၊ အိမျထဲမှာ ထားထားလိုကျ ထူးထူးခွားခွား အဆငျပွလောတာကို တှရေ့ပါလိမျ့မယျ ခငျဗြာ ။
ဘယျနေ့ ဘယျအခြိနျမှာ ဆောငျ တငျထားရမလဲ မိမိမှေးနမေ့နကျ 9း45 မှာ တငျ ဆောငျထားပါလေ ။လူမဝငျသော ဆိုငျမြား တညျးခိုခနျးမြား ဟိုတယျမြား လူမြားလှိမျ့ဝငျလာ ပါလိမျ့မယျ ။အရောငျးအဝယျ လုပျငနျးမြား သိသိသာ သာတိုးတကျလာ တာကို တှရေ့ပါလိမျ့မညျ ။
တဈပတျလောကျ လှိမျ့ဝငျနပွေီး နောကျပိုငျးနညျးနညျး ပါးသှားတာ မြိုးဖွဈခဲ့ရငျတော့ လှိမျ့ဝငျ အရုပျကလေးကို မကျြနှာ သဈပေးလိုကျပါ ။ပွီးတော့ ရမှေေးလေး ဖွနျပေးလိုကျပါ ။
ပွီးတော့ လာထား လာထား ဆိုပွီး လကျခုတျ တီးပွီးပွော လိုကျပါ ။
ဝငျလာပါလိမျ့မယျဗြာ .. ပထမဆုံး ဝငျသောငှမှေ အနညျးအကငျြးကို ဘုရားလှူ လိုကျပါ ။ ပွီးမှ ကနျြတဲ့ ပိုကျဆံကို သုံးပါလေ ။ပထမ ဆုံးဝငျတဲ့ ပိုကျဆံကို အနိဌ ပစ်စညျးတှေ ဝယျမသုံးလိုကျပါနဲ့ ။နောကျပွီး လာဒျတိတျစေ တဲ့ အကွောငျးတရားတှေ ကို ရှောငျပေးရပါတယျ။အရငျက ရေးခဲ့ဖူးပါတယျ။ အခုပွနျရေး ပွလိုကျရပါတယျ ဗြာ။
၁။ မနကျအိပျယာထလြှငျ အိမျသာထဲသို တနျးမသှားရ ၊ မီးဖိုခြောငျထဲသို့ တနျးသှားပွီး မီးမှေးခွငျး ထမငျးအိုးတညျးခွငျး တနျးမလုပျရပါ။လာဒျတိတျတတျပါသညျ။
၂။ ထမငျးစားလြှငျ ဘေးမှာကနြသော အမှိုကျမြားကို ထမငျးစားပွီး လြှငျ မိမိပနျးကနျထဲသို့ ထညျ့ပွီး ဆေးဖို့ မယူသှားရပါ။
၃။ စားပွီး အိုးခှကျပနျးကနျမြားကို မနကျမှ ဆေးတော့ပါမယျဆိုပွီး မီးဖိုခြောငျထဲမှာ မဆေးပဲ တဈညလုံး ပုံမထား သငျ့ပါ ။
၅။ လငျမယားအခငျြးခငျြး ၉ နာရီ မကြျောမီ စောစောစီးစီး စကားမြား ရနျမဖွဈရ။ မငွူစူးရ ၊ ဒေါသမဖွဈရပါ။
စောစော စီးစီး နိမိတျ မကောငျးသော အမင်ျဂလာ သီခငျြးမြား မဖှငျ့ရပါ ။
အဲဒီ၅ခကျြ ၂ ခကျြလောကျ လုပျမိလြှငျ လာဒျတိတျစတေတျပါတယျ။ငှဝေငျပါလြှငျလညျး အသာလှတျ ပွနျပွနျထှကျသှားတတျပါသညျ။ထို့ကွောငျ့ အဲဒီ အခကျြမြား ကို ရှောငျသငျ့ပါသညျ။
အားလုံး ငှကွေေး ရတနာမြား လုပျငနျးကောငျးမြား လှိမျ့ဝငျကွပွီး အလှူ အတမျး ၊ ဘာသာရေး ၊ သာသာနာရေး ။
ပရဟိတအရေးအတှကျ တညျသုံးနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျး မတ်ေတာ ပို့သရငျး .ဆရာထှနျးအောငျလူ ။ ကြောကျဆညျ ။
ကျမ ရောင်းတဲ့ လှိမ့်ဝင် တည်သုံး အဆောင်အကြောင်း ဗဟုသုတအဖြစ် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။တစ်နိုင်ငံလုံးစိတ်ဝင် စားနေကြတဲ့ လှိမ့်ဝင်တည်သုံးယတြာက ကျွန်တော်စ ခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ ။ အဖြစ်က ဒီလိုပါ ။
၁။ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်နဲ့ ၂နှစ်ခွဲနေမှ ပြန်တွေ့တော့ သူ့မိသားစုကတော်တော်လေး အဆင်ပြေနေပြီးအရင် ထရံအိ မ်လေးနေရာမှာ အာစီတစ်ထပ်တိုက်ကြီးနဲ့ပေါ့ အရမ်းကိုအဆင်ပြေပြီး နောက်ထပ်တိုက်တစ်လုံးတောင် ဆောက်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
သူ့လုပ်ငန်းက တအားလှိမ့်ဝင်သွားတာကို အဲ့ သူ့အိမ်ရှေ့အဝင်ဝမှာ လှိမ့်ဝင် စဥ့်အရုပ်လေးကို အိမ်ဘက် လှိမ့်ဝင်နေတဲ့ ပုံချိတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်အိမ်ဧည့်ခန်းမှာတော့ စဥ့်အိုးလေး တည်နေတဲ့ပုံကို တင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်မေးကြည့်တော့ လှိမ့် ဝင် တည် သုံးလေတဲ့ စီးပွားဖြစ်တယ် လုပ်ငန်းကောင်းတယ်တဲ့ဗျာ
၂။ ကျွန်တော်တို့ မြို့မှာ ထမင်းဆိုင်တစ်ဆိုင် ရှိတယ် အရမ်းကိုရောင်းရတယ်အလှူပေးနေသလိုကိုရော င်းရတာ သူတို့အိမ်မှာလည်း အိမ်ရှေ့သံတံခါး အုတ်ခုံမှာအဲဒီ လှိမ့်ဝင် အရုပ်လေး အိမ်ဘက်ကို လှိမ့်ဝင်နေတဲ့ ပုံလေး တင် ထားတာတွေ့ရပါတယ်
သူ့ထမင်းဆိုင်ကတော့ လူတွေ လှိမ့်ဝင်နေတော့တာပါပဲဗျာ
၃။ အဲဒါနဲ့ လူမဝင် လုပ်ငန်းမကောင်းတဲ့ သူနဲ့ အကြွေးတင်နေတဲ့မိတ်ဆွေ တစ်ယောက် နှစ်ယောက်ကိုအဲဒီအရုပ်လေး နှစ်ခုကို ထားဖို့ ပြောလိုက်တာ သူတို့လည်း ကျောက်ဆည် တပေါင်းပွဲနဲ့ကြုံတော့စဥ့်ကူးက စဉ်အိုးသည်တွေ လာတာနဲ့ အဲဒီ အရုပ်လေးကို တစ်ရုပ်ကို အိမ်ရှေမှာထားပြီး
တစ်ရုပ်ကို အိမ်ထဲမှာထားဖို့ ပြောလိုက်တာ အဲဒီ ၃ယောက်ဟာ ၆လအတွင်း လုံးဝ မဆပ်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့ အကြွေးတွေ ကြေပြီး အဆင်ပြေ သူတွေဖြစ်နေ ပါပြီဗျာ
အဲဒါနဲ့ ပြင်ဦးလွင်က ဗေဒင် ဆရာ ဆရာဝင်းမော်အောင် အိမ်လာတော့ အဲဒီ ယတြာအကြောင်းပြောပြလိုက်တာသူလည်း သဘောကျပြီး အဲဒါကို အားလုံး သိအောင် ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တင်ပေးပါလို့ ပြောလို့ တင်ပေးရာကနေလှိမ့်ဝင်တည်သုံး အိုးသည်တွေ ရောင်းမလောက် ဖြစ်ကုန်တော့ တာပါပဲ ဗျာ ။
လှိမ့်ဝင် တည်သုံး စဥ့်အိုးလေးတွေ ဘယ်လို ဓာတ်ဆင်ရတာပါလဲ အဲဒီလှိမ့်ဝင် တည်သုံး အရုပ်လေးတွေကဟိုအရင် လောကီပညာရှင် (ဆန်းပညာရှင်) တွေ လုပ်သွားခဲ့တာပါ ။
ပညှပ်သွားရာ ဓါတ်သက်ပါ ဆိုသလို လူအများ သုံးစကား လှိမ့်ဝင် ဆိုတာကို ယူပြီး လှိမ့်ဝင် နေတဲ့ အရုပ်ကလေး တွေ ကို စီရင်ပေးသွားတာပါ ။
အဲဒီမှာ စဥ့်အိုး လေး ကို လှိမ့်ဝင်နေတဲ့ ကောင်လေး( ၂ ၄ ) ပုံလေးပါ ။စဥ့်အိုးကို ဘာလို့သုံးလဲ . တစ်ခြားဟာတစ် ခု ခုကိုလည်း လှိမ့်ဝင်လို့ ရတာပဲလို့ တွေးမိတော့ စဥ့်အိုး = ၃ ၁ ဆိုတာ အောင်စေ = အေးစေ = ၁ ၃ ကို ကက်က င်းရိုက်သွားတယ် ထင်ပါ တယ် ။
လှိမ့်ဝင် = ၄ ၄ = ရွှေလာ = လူလာ = လိုရာ = ရလာ ဓါတ်ပေါ့..လှိမ့်ဝင် ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲ ဆိုတော့တည်သုံးလေ တစ်ရုပ်လုပ်သွားပါတယ်။လှိမ့်ဝင်လာတဲ့ဟာတွေကို ဘုရားတည် ၊ကျာင်းတည် ၊ဇရပ် တည် ။
သာသနာ တည်နိုင်တဲ့အထိ သုံးနိုင်ဖို့ လောကီဝိဇ္ဇာ အဘများက စီရင် သွားခဲ့တဲ့ ဓါတ်အရုပ်လေးတွေပါ ။
ဘယ်လို သုံးမလဲ ၊ ဘယ်လို ဆော င်မလဲ ဗျာ
၁။ သန ချေ ရပါတယ်။ အညံ့ခြေရပါတယ်
ကိုယ့်စီးပွားအတွက် အထွဋ် အမြတ်ဆောင်မည့် ပစ္စည်းဟာ ကားနဲ့သယ်လားရင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး ကလေး လူကြီး ကျော်ခွသွားတာမျိုး ၊ကားထိုင်ခံအောက်ထဲထည့် သယ်လာတာမျိုး တွေရှိတတ်ပါတယ်။
အဲဒီလို အညံ့ဓါတ်တွေ ကင်းဖို့ ဆားရည် (ရေ ၁ ဂါလံ ကို ဆား ၂ ဇွန်းထည့်ပြီး)ကို ဇလုံထဲထည့်ပြီးလက်ဆယ် ချောင်းက ဆေးဖြစ်စေ ဆိုပြီး ၃ခါ ပြောပြီး လက်နှစ်ဖက်ကို ဇလုံထဲထည့်ပြီးသနပ်ခါး သွေးသလို လက်ယာရစ် မွှေပြီး ပါးစပ် မှလည်း ဥုမ် သန သန သန အပေါင်း ထောင်သောင်း ကြေစရာ ကြေ ဆိုပြီး၃၇ ခေါက် ရွတ်ပြီး မှ အဲဒီ အရုပ် များကို ၎င်းရေနဲ့ ဆေးပါ ။
ပြီးမှ ၎င်း အရုပ်များကို ရေမွှေး (နဝင်းရေ) ရည်နဲ့ ပက်ဖြန်းပြီးမှာ အိမ်ဘက်သို့ အိုးလှိမ့် ဝင်နေတဲ့ပုံအိုးကို အိမ်ဘက် အတွင်းသို့ ထားပြီး အိမ်ရှေ့မှာ ထားလိုက်ပါ ။တည်သုံးအိုး လေးကိုတော့ အလုပ်စားပွဲ ၊ အိပ်ခန်းစားပွဲ ၊ အိမ်ထဲမှာ ထားထားလိုက် ထူးထူးခြားခြား အဆင်ပြေလာတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ် ခင်ဗျာ ။
ဘယ်နေ့ ဘယ်အချိန်မှာ ဆောင် တင်ထားရမလဲ မိမိမွေးနေ့မနက် 9း45 မှာ တင် ဆောင်ထားပါလေ ။လူမဝင်သော ဆိုင်များ တည်းခိုခန်းများ ဟိုတယ်များ လူများလှိမ့်ဝင်လာ ပါလိမ့်မယ် ။အရောင်းအဝယ် လုပ်ငန်းများ သိသိသာ သာတိုးတက်လာ တာကို တွေ့ရပါလိမ့်မည် ။
တစ်ပတ်လောက် လှိမ့်ဝင်နေပြီး နောက်ပိုင်းနည်းနည်း ပါးသွားတာ မျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ လှိမ့်ဝင် အရုပ်ကလေးကို မျက်နှာ သစ်ပေးလိုက်ပါ ။ပြီးတော့ ရေမွှေးလေး ဖြန်ပေးလိုက်ပါ ။
ပြီးတော့ လာထား လာထား ဆိုပြီး လက်ခုတ် တီးပြီးပြော လိုက်ပါ ။
ဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဗျာ .. ပထမဆုံး ဝင်သောငွေမှ အနည်းအကျင်းကို ဘုရားလှူ လိုက်ပါ ။ ပြီးမှ ကျန်တဲ့ ပိုက်ဆံကို သုံးပါလေ ။ပထမ ဆုံးဝင်တဲ့ ပိုက်ဆံကို အနိဌ ပစ္စည်းတွေ ဝယ်မသုံးလိုက်ပါနဲ့ ။နောက်ပြီး လာဒ်တိတ်စေ တဲ့ အကြောင်းတရားတွေ ကို ရှောင်ပေးရပါတယ်။အရင်က ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုပြန်ရေး ပြလိုက်ရပါတယ် ဗျာ။
၁။ မနက်အိပ်ယာထလျှင် အိမ်သာထဲသို တန်းမသွားရ ၊ မီးဖိုချောင်ထဲသို့ တန်းသွားပြီး မီးမွေးခြင်း ထမင်းအိုးတည်းခြင်း တန်းမလုပ်ရပါ။လာဒ်တိတ်တတ်ပါသည်။
၂။ ထမင်းစားလျှင် ဘေးမှာကျနေသာ အမှိုက်များကို ထမင်းစားပြီး လျှင် မိမိပန်းကန်ထဲသို့ ထည့်ပြီး ဆေးဖို့ မယူသွားရပါ။
၃။ စားပြီး အိုးခွက်ပန်းကန်များကို မနက်မှ ဆေးတော့ပါမယ်ဆိုပြီး မီးဖိုချောင်ထဲမှာ မဆေးပဲ တစ်ညလုံး ပုံမထား သင့်ပါ ။
၅။ လင်မယားအချင်းချင်း ၉ နာရီ မကျော်မီ စောစောစီးစီး စကားများ ရန်မဖြစ်ရ။ မငြူစူးရ ၊ ဒေါသမဖြစ်ရပါ။
စောစော စီးစီး နိမိတ် မကောင်းသော အမင်္ဂလာ သီချင်းများ မဖွင့်ရပါ ။
အဲဒီ၅ချက် ၂ ချက်လောက် လုပ်မိလျှင် လာဒ်တိတ်စေတတ်ပါတယ်။ငွေဝင်ပါလျှင်လည်း အသာလွတ် ပြန်ပြန်ထွက်သွားတတ်ပါသည်။ထို့ကြောင့် အဲဒီ အချက်များ ကို ရှောင်သင့်ပါသည်။
အားလုံး ငွေကြေး ရတနာများ လုပ်ငန်းကောင်းများ လှိမ့်ဝင်ကြပြီး အလှူ အတမ်း ၊ ဘာသာရေး ၊ သာသာနာရေး ။
ပရဟိတအရေးအတွက် တည်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်း မေတ္တာ ပို့သရင်း .ဆရာထွန်းအောင်လူ ။ ကျောက်ဆည် ။
ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျမွနျမာလူမြိုးတို့ရဲ့ ယုံကွညျကိုးကှယျရာ စတေီတျောကွီးဖွဈတဲ့ ရှတေိဂုံစတေီတျောကွီးအောကျမှာ ပငျလယျရေ အတကျအကအြလိုကျ ရအေနိမျ့အမွငျ့ဖွဈပျေါစတေဲ့
(၁၀) ပပေတျလညျလောကျရှိတဲ့ ရတှေငျးနဲ့ အဲဒီရတှေငျးထဲမှာ (၆) ပခှေဲလောကျရှိပွီး ရတနာမြားစီခယျြထားတဲ့ရှလှေတေဈစီးရှိတယျလို့ မကျြမွငျကိုယျတှေ့ ကွုံဖူးခဲ့တဲ့ မွနျမာနိုငျငံဖှား အာမေးနီးယားလူမြိုး ဒီအကျဈအပရမေ ကပွောကွားခဲ့တယျလို့ ၁၃. ၃. ၆၈ နထေု့တျ ကွေးမုံသတငျးစာမှာ ဖျောပွခဲ့တာကို ကြီးမနိုးတငျဝငျး (ပေါငျးတညျ) ရဲ့ပွနျလညျဖျောပွခကျြအရ သိရှိရပါတယျ။
မစ်စတာအပရမကေို ကွေးမုံသတငျးစာက တှဆေုံ့မေးမွနျးရာမှာ ၁၉၀၄ခု၊ သူ့ရဲ့အသကျ(၇) နှဈသားအရှယျမှာ သူငယျခငျြးတှနေဲ့အတူ ရှတေိဂုံဘုရားကို သှားရောကျခဲ့တယျ။
ရှတေိဂုံရငျပွငျတျောရဲ့ အရှမွေ့ောကျထောငျ့၊ တနင်ျဂနှထေောငျ့ရှိ ဌာပနာတိုကျဝကို ရောကျတဲ့အခါမှာ ရသကွေီ့းတဈပါးနဲ့တှလေို့ ခဉျြးကပျတောငျးပနျပွီး ဌာပနာတိုကျထဲကို ဆငျးခဲ့တယျလို့ဆိုပါတယျ။
ရသကွေီ့းရဲ့ခှငျ့ပွုခကျြအရ ဌာပနာတိုကျထဲကို ဆငျးသှားတဲ့လမျး တဈလြှောကျလုံးမှာ ယောဂီဝတျနဲ့နီဝါရောငျဝတျပုဂ်ဂိုလျ (၇) ဦးကို (၈) ပေ၊ (၉) ပစေီခွားပွီးတှရေ့တယျလို့ဆိုပါ တယျ။ ဌာပနာတိုကျရဲ့ ပတျပတျလညျကို အုတျမြားနဲ့အခနျး (၃၆) ခနျး တညျဆောကျထားတယျ။
အလယျတိုငျမရှိ ဘူး။ အလယျဗဟိုမှာတော့ (၁၀) ပပေတျလညျလောကျရှိတဲ့ ရတှေငျးရှိတယျ။ ရတှေငျးဟာ ပငျလယျရေ အတကျအကအြလိုကျ ရအေနိမျ့အမွငျ့ ဖွဈပျေါတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ရတှေငျးထဲမှာ အလြား (၆) ပခှေဲခနျ့ရှိပွီးကြောကျမကျြရတနာမြားနဲ့ စီခယျြထားတဲ့ ရှကေရဝိတျလှေ တဈစငျးရှိတယျ။ လှဟော ဒီရေ အတကျအကအြလိုကျ ရတှေငျးထဲမှာ အနိမျ့အမွငျ့လှုပျရှားနတေယျ။ ကရဝိတျရှလှေပေျေါမှာ ဆံတျောမြားလို့ ယူဆရတဲ့ ဌာပနာတှေ ကိနျးဝပျလြှကျရှိတယျ။ ဒါပမေဲ့ပုဝါလှမျးထားလို့ ဆံတျောလို့ အတိအကြ မပွောနိုငျဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။
ဌာပနာတိုကျရဲ့ ထူခွားခကျြမှာ တဈခနျးလုံး ထိနျလငျးနခွေငျးဖွဈတယျ။ တဈခုတညျးသော အလငျးရောငျဟာ အခြိနျအခါမရှေး ရှလှေပေျေါကို အခြိနျမရှေး ထိုးစိုကျကရြောကျနတေယျ။
ခမျးနားဆနျးကွယျတဲ့ ဌာပနာတိုကျကို ကိုယျတိုငျ တှမွေ့ငျခဲ့ရတာဖွဈလို့ နှောငျးလူတှေ သုတသေနပွုနိုငျအောငျ ရှတေိဂုံဂေါပကအဖှဲ့ကို မွပေုံဆှဲလို့ တငျပွခဲ့တယျ။
ရှတေိဂုံဂေါပကအဖှဲ့ကလညျး မစ်စတာအပရမကေို တှဆေုံ့ မေးမွနျးပွီး ဌာပနာတိုကျတညျနရောကို လိုကျလံပွသစတေဲ့အခါမှာ ဌာပနာတိုကျ လှိုဏျဂူဟာ ရှတေိဂုံရငျပွငျတျော တနင်ျဂနှထေောငျ့ရှိ ဆုတောငျးပွညျ့ဘုရားနဲ့ ဆုတောငျးပွညျ့တနျဆောငျး နရောမှာ ရှိတယျဆိုပမေဲ့လညျး နောကျတိုး တနျဆောငျးတှနေဲ့ ဘုရားမြား ထပျမံ မှမျးမံပွငျဆငျထားမှုကွောငျ့ အတိအကပြွသနိုငျခွငျးမရှိပဲ ဆုတောငျးပွညျ့စတေီရဲ့ လှိုဏျဂူအောကျမှာသာ ရှိတယျလို့ ခနျ့မှနျးညှနျပွ သှားနိုငျတယျလို့ သိရပါတယျ။
မစ်စတာအပရမေ ကို လှစ်စလမျး (ယခုဆိပျကမျးသာလမျး) အမှတျ (၂၅) မှာ ၁၈၉၅ ခုနှဈက ဖှားမွငျခဲ့တာပါ။ မိဘမြားမှာ မစ်စတာအကျဈအပရမေ နဲ့ မစ်စကျရိုဈလူကပျဈ တို့ဖွဈပါတယျ။ မွနျမာအမြိုးသမီး ဒျေါသိနျးရှနေဲ့အိမျထောငျကပြွီး သားသမီး ၅ ယောကျ ထှနျးကားခဲ့ကာ သားသမီးမွေးမြားနဲ့အတူ ဘောကျထျောမှာ နထေိုငျတယျလို့ သတငျးမှာ
မစ်စတာအပရမေ ကိုယနကွေ့ေးမုံက တှဆေုံ့မွေးမွနျးပွီး ၁၃. ၃. ၆၈ နမှေ့ာ ဖျောပွခဲ့ခွငျး ဖွဈပါတယျ။ တှဆေုံ့ မေးမွနျးခြိနျမှာ မစ်စတာအပရမေ ဟာ (၇၃) နှဈရှိပွီလို့ ဖျောပွထားပါတယျ။
ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတှေ ယုံကွညျကိုးကှယျတဲ့ ရှတေိဂုံဘုရားကွီးရဲ့အောကျ ပေ (၆၀) ခနျ့အကှာမှာ တညျရှိတဲ့ ဆံတျောတှငျး ဌာပနာတိုကျကွီးအကွောငျးကို နှောငျးလူမြား သိရှိစရေနျထပျမံ ဖျောပွရခွငျးဖွဈပါတယျ။
ဖူးမွျောရခဲသော ရှတေိဂုံစတေီတျောမွတျကွီး၏ မွအေောကျဋ်ဌာပနာ မွငျကှငျးမြား နှငျ့ရှတေိဂုံမှ အံ့ဖှယျကိုးပါး ။
ရှတေိဂုံ စတေီတျော ကုနျးတျောပျေါတှငျ ရှတေိဂုံ ဘုရားကွီး မှလှဲလြှငျ သူ့ထောငျ့နှငျ့သူ မှနျဘုရငျမြား၊ မွနျမာမငျးမြား၊ မှူးမတျ စဈသနောပတိမြား၊ ထှကျရပျလမျး အားထုတျသော ဘိုးဘိုးအောငျ၊ ဓမ်မစတေီနှငျ့ တကှ ဘားမဲ့ဆရာတျော၊ ရှငျမထီး၊ ရှငျအဇ်ဖဂေါဏ စသော ပုဂ်ဂိုလျ အကြျောအမျောမြား တညျထား ကိုးကှယျခဲ့သညျ့ ဘုရားမြားစှာ ရှိနပေသေညျ။
ရှတေိဂုံ ဘုရား ကုနျးတျောပျေါရှိ ထူးခွားသော အံ့ဖှယျ ၉-ဌနသို့ လှညျ့ပွီး ပူဇျော အားထုတျလေ့ ရှိကွသညျ။ ထိုထူးခွား သော အံ့ဖှယျ ၉-ဌာနကို မနျလညျဆရာတျော ဘုရားကွီးနှငျ့ တကှ ထငျရှား ကြျောကွားသော ဆရာတျောမြားလညျးလှညျ့ လညျ ရှိခိုး ပူဇျောလေ့ ရှိတကျကွ လသေညျ။
ထို ထူးခွားသော အံ့ဖှယျ ၉-ဌာနမှာ
(၁) တ၀ဂူ ဆုတောငျးပွညျ့ဘုရား (သို့) ပတ်တမွားမကျြရှငျဘုရား။
ရှတေိဂုံ စတေီတျော အထကျ ပစ်စယံ အရှဘေ့ကျ တညျ့တညျ့တှငျ တညျရှိသညျ။ ထိုတ၀ဂူ ဘုရားသို့ အမြိုးသားမြား သာလြှငျ တကျရောကျ ဖူးမွျောခှငျ့ ရပွီး၊ အမြိုးသမီးမြား
မဖူးမွျော နိုငျသော ဘုရားဟု ဆိုလြှငျ မှားမညျ မဟုတျပေ။ တ၀ဂူ ပတ်တမွား မကျြရှငျ ဘုရား ဟုလညျး ချေါတှငျလသေညျ။
ဆုတောငျးပွညျ့ တ၀ဂူု ဘုရားသညျ အလှနျ တနျခိုးကွီးသညျ့ အတှကျ ဆုတောငျး ပွညျ့သညျဟု အလှနျ ယုံကွညျကွသညျ။ ရှေးအခါက မငျးညီမငျးသားမြားသညျ တ၀ဂူ ဆုတောငျးပွညျ့ ဘုရား တကျပွီး ဆုတောငျးဆုယူ ပွုလုပျကွသညျ။ သစ်စာ အဓိဌာနျ ပွုလုပျကွသညျ။ ပွုလုပျသညျ့ အတိုငျး အောငျ
အခငျြးခငျြး သတျဖွတျပွီး နနျးရပျထီးဖွူ လုယူကွသညျ။ ထီးနနျးအုပျခြုပျမငျးလုပျကွသညျ။ သို့အတှကျ အခငျြးခငျြး မသတျ ဖွတျစရေနျ ကွီးစဉျငယျလိုကျ မငျးလုပျစရေနျ အတှကျ မငျးညီမငျးသားမြား တ၀ဂူ ဆုတောငျးပွညျ့ ဘုရား မဖူးမွျောရဟု ဘုရငျမြားက အမိနျ့စာခြှနျတျော ထုတျပွနျခဲ့ရလသေညျ ဟု မှတျသားခဲ့ရဖူးပါသညျ။
ထို့ကွောငျ့ တ၀ဂူ ဘုရားကို လူတိုငျး အလှယျတကူ မဖူးမွျော နိုငျစရေနျ ဆုမတောငျးနိုငျကွစရေနျ တ၀ဂူ ဘုရားကို အထကျ ပစ်စယံ လူသူ အရောကျအပေါကျ နညျး သော နရောတှငျ လြှို့ဝှကျ တညျထား ကိုးကှယျကွသညျဟု ပွောသမှတျ ပွုကွပါသညျ။
(ယခုအခါ ထိုဘုရားအား အမြိုးသားမြား အနဖွေငျ့ စနေ တနင်ျဂနှနှေငျ့ ဥပုပျနမြေ့ားတှငျ တကျရောကျ ဖူးမွျောနိုငျပွီး အခွား သူမြား အနဖွေငျ့ အောကျတှငျ TV မြား မှ
(၂) ဝိဇ်ဖာ ဇျောဂြီ ဘုရား။
ရှတေိဂုံ ကုနျးတျော ရငျပွငျတျော စနထေောငျ့ တညျ့တညျ့တှငျ တညျရှိသညျ။ စတေီငယျပျေါတှငျ ဇျောဂြီရုပျမြား ပွုလုပျထားသညျကို တှရေ့သညျ။ လောကီ ပညာရပျ အစီ
အမံဖွငျ့ ပွုလုပျထားသညျ့ ဘုရားဟု သိရှိရလသေညျ။
(၃) ဆုတောငျးပွညျ့ ဘုရား။
ရှတေိဂုံ ရငျပွငျတျော ရာဟုထောငျ့ သံတနျဆောငျးကွီး နံဘေးတှငျတညျရှိသညျ။ အခြို့ က ဘား လေးဘား ဘုရားဟု ချေါ ကွသညျ။ ရှငျစောပု စတေီ ဟုလညျးတှငျသညျ။ ဘုရားအနီးတှငျ စကားစိမျး၊ စကားဝါ စသော စကားပငျ လေးပငျ ရှိသညျ။
(၄) ရှငျမထီး ဘုရား။
ရှတေိဂုံ ရငျပွငျတျော တနင်ျဂနှထေောငျ့ရှိ နောငျတျောကွီး ဘုရား မွောကျဘကျ အာရုံခံတနျဆောငျး (ရှငျမထီးတနျဆောငျး) တှငျးရှိ ဘုရားဖွဈသညျ။ နှဈပေါငျး ၁၀၀၀-ခနျ့က ရှငျမထီးဆရာတျော တညျသှားသညျ ဟု ပွောသညျ။
(၅) ရှငျ အဇ်ဖဂေါဏ ဘုရား။
ရှတေိဂုံ ဘုရား ရငျပွငျတျော တနင်ျဂနှထေောငျ့ရှိ နောငျတျောကွီး ဘုရား၏ တောငျဘကျ အာရုံခံ တနျဆောငျးတှငျး ရုပျပှားတျော ဖွဈသညျ။ ရှငျ အဇ်ဖဂေါဏကား ဆိတျမကျြလုံး တဈဖကျ၊ နှားမကျြလုံး တဈဖကျ ရှိသော ကိုယျတျောဟု ထငျရှားသညျ။ အဂ်ဂိရပျ တနျခိုးဖွငျ့ ပုဂံခတျေက ရှမေိုး ငှမေိုး ရှာအောငျ စောငျမခဲ့သော ကိုယျတျောဟု ရှေးဟောငျးသမိုငျး စာပေ တို့တှငျ ဆို၏။
ဆရာတျောက ၄ငျးတညျခဲ့မှနျး လူမြား သိစရေနျ မကျြလုံး
တျော တဈဖကျကဉျြး၊ တဈဖကျကယျြ ထုလုပျသှားကွောငျး အဆိုရှိသညျ။ ထို အာရုံခံတနျဆောငျး ရာဟုထောငျ့ (ဝါ) အနောကျမွောကျထောငျ့ရှိ ရုပျပှါးတျောမှာ မကျြလုံးတျော တဈဖကျကဉျြး၊ တဈဖကျကယျြ အရှယျခငျြး မတူအောငျ ပွုလုပျထားလသေညျ။
(၆) ဆံတျောတှငျး ရုပျပှားတျော။
ရှတေိဂုံ ရငျပွငျတျော မွောကျဘကျတှငျ ရှိသော ဆံတျောတှငျး တနျဆောငျး အတှငျးတှငျ တညျရှိသညျ။ ဆံတောငျတှငျး တနျဆောငျးမှာ ဒဂုံခငျခငျလေး၏ ကောငျးမှု ဖွဈသော မဟာဗောဓိ စတေီ၏ အနောကျဘကျ မကျြနှာခငျြးဆိုငျတှငျ တညျရှိသညျ။
ရှတေိဂုံ စတေီကို တညျစဉျက ဆံတျောမြား ဆေးကွောသညျ့ တှငျး ဖွဈသညျဟု မှတျသားကွလသေညျ။ တနျဆောငျးတှငျး ရုပျပှားတျော အနောကျတှငျ ယခငျ နှဈပေါငျး (၅၀)ကြျောက ဆံတျောတှငျးသို့ဆငျးရာ ဥမငျ လိုဏျခေါငျး ရှိသညျဟု ပွောစမှတျရှိသညျ။
ဆံတျောတှငျးမှ ရသေညျ ဧရာဝတီမွဈရနှေငျ့ တဈကွောတညျး ဖွဈသဖွငျ့ ဒီရအေတကျအကြ ရှိတိုငျး ဆံတျောတှငျးတှငျလညျး အတကျအကြ ရှိသညျဟု ဆိုကွသညျ။ ဆံတျောတှငျး အုတျပွသာဒျကို ငုံပွီး ၁၈၇၉ ခုနှဈကတနျဆောငျး ဆောကျလုပျခဲ့လသေညျ။
(၇) ဘိုးဘိုးအောငျ ဘုရား။
ရှတေိဂုံ စတေီတျော အရှမေု့ချ အနီးရှိ ဘိုးဘိုးအောငျ တနျဆောငျး ဘုရားပငျဖွဈသညျ။ ထိုတနျဆောငျး အတှငျးရှိ ရုပျပှားတျောကို ဘိုးဘိုးအောငျ တညျရဈသညျဟု ပွောစမှတျ
ရှိသညျ။ ဘိုးဘိုးအောငျ တနျဆောငျး အနောကျဘကျတှငျ ကြောခငျြး ကပျလြှကျ ရှိသညျကား ဓမ်မစတေီ၏ ကောငျးမှုတျော စတေီ ဖွဈသညျ။ ဓမ်မစတေီ ဘုရားရှတှေ့ငျ ခွင်ျသနှေ့ငျ့ ကြားရုပျ ရှိသညျ။
(၈) လကျပကျလကျ ဘုရား။
ရှတေိဂုံ စတေီတျော အရှမေု့ချ အာရုံခံ တနျဆောငျး အတှငျးတှငျ ရှိ၏။ ကကုသနျ ရုပျပှားတျော ဖွဈသညျ။လိုဏျ အတှငျးရှိ ကကုသတျ ဘုရားရှငျ ရုပျပှားတျော၏ လကျယာဘကျ လကျတျောမှာ အခွား ဘုရားမြား ထုစဉျကဲ့သို့ လကျမှောကျခုံ မဟုတျဘဲ လကျတျော ပကျလကျ ထားပွီး ထုထားသဖွငျ့ လကျပကျလကျ ဘုရားဟုချေါဝျေါလရှေိ့လသေညျ။
(၉) ပွဒါးရှငျ ဘုရား။
ရှတေိဂုံ ရငျပွငျတျော အရှမေု့ချနှငျ့ အင်ျဂါထောငျ့ အကွားရှိ စတေီ တဈဆူ၏ တောငျဘကျမုချ အတှငျးရှိ ကွေး ဆငျးတုတျော ဖွဈသညျ။ အလှနျ အခြိုးအစား ကနြ ပွပွေဈ
လှသညျ။ နဖူးတျောတှငျ မို့မောကျ နပွေီး ပွဒါးရှငျလုံး ဌာပနာ ထားသညျဟု ပွောစမှတျရှိ၏။
ပွဒါးရှငျလုံး ရှိသညျ မရှိသညျကား အသအေခြာ မသိရသျောလညျး အဆိုပါကွေး ဆငျးတုတျောမှာ ရှတေိဂုံ ကုနျးတျောပျေါရှိ ဆငျးတုတျောမြား အနကျ အလှနျ ကွညျညိုဖှယျ ကောငျးလှသော ဆငျးတုတျော ဖွဈကွောငျးကို ဖူး ဘူး သူတိုငျး ၀နျခံရပေ
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာ စေတီတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးအောက်မှာ ပင်လယ်ရေ အတက်အကျအလိုက် ရေအနိမ့်အမြင့်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့
(၁၀) ပေပတ်လည်လောက်ရှိတဲ့ ရေတွင်းနဲ့ အဲဒီရေတွင်းထဲမှာ (၆) ပေခွဲလောက်ရှိပြီး ရတနာများစီချယ်ထားတဲ့ရွှေလှေတစ်စီးရှိတယ်လို့ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ကြုံဖူးခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဖွား အာမေးနီးယားလူမျိုး ဒီအက်စ်အပရမေ ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ ၁၃. ၃. ၆၈ နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာမှာ ဖော်ပြခဲ့တာကို ကျီးမနိုးတင်ဝင်း (ပေါင်းတည်) ရဲ့ပြန်လည်ဖော်ပြချက်အရ သိရှိရပါတယ်။
မစ္စတာအပရမေကို ကြေးမုံသတင်းစာက တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာမှာ ၁၉၀၄ခု၊ သူ့ရဲ့အသက်(၇) နှစ်သားအရွယ်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ရွှေတိဂုံဘုရားကို သွားရောက်ခဲ့တယ်။
ရွှေတိဂုံရင်ပြင်တော်ရဲ့ အရှေ့မြောက်ထောင့်၊ တနင်္ဂနွေထောင့်ရှိ ဌာပနာတိုက်ဝကို ရောက်တဲ့အခါမှာ ရသေ့ကြီးတစ်ပါးနဲ့တွေ့လို့ ချဉ်းကပ်တောင်းပန်ပြီး ဌာပနာတိုက်ထဲကို ဆင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ရသေ့ကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်အရ ဌာပနာတိုက်ထဲကို ဆင်းသွားတဲ့လမ်း တစ်လျှောက်လုံးမှာ ယောဂီဝတ်နဲ့နီဝါရောင်ဝတ်ပုဂ္ဂိုလ် (၇) ဦးကို (၈) ပေ၊ (၉) ပေစီခြားပြီးတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါ တယ်။ ဌာပနာတိုက်ရဲ့ ပတ်ပတ်လည်ကို အုတ်များနဲ့အခန်း (၃၆) ခန်း တည်ဆောက်ထားတယ်။
အလယ်တိုင်မရှိ ဘူး။ အလယ်ဗဟိုမှာတော့ (၁၀) ပေပတ်လည်လောက်ရှိတဲ့ ရေတွင်းရှိတယ်။ ရေတွင်းဟာ ပင်လယ်ရေ အတက်အကျအလိုက် ရေအနိမ့်အမြင့် ဖြစ်ပေါ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ရေတွင်းထဲမှာ အလျား (၆) ပေခွဲခန့်ရှိပြီးကျောက်မျက်ရတနာများနဲ့ စီချယ်ထားတဲ့ ရွှေကရဝိတ်လှေ တစ်စင်းရှိတယ်။ လှေဟာ ဒီရေ အတက်အကျအလိုက် ရေတွင်းထဲမှာ အနိမ့်အမြင့်လှုပ်ရှားနေတယ်။ ကရဝိတ်ရွှေလှေပေါ်မှာ ဆံတော်များလို့ ယူဆရတဲ့ ဌာပနာတွေ ကိန်းဝပ်လျှက်ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ပုဝါလွှမ်းထားလို့ ဆံတော်လို့ အတိအကျ မပြောနိုင်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဌာပနာတိုက်ရဲ့ ထူခြားချက်မှာ တစ်ခန်းလုံး ထိန်လင်းနေခြင်းဖြစ်တယ်။ တစ်ခုတည်းသော အလင်းရောင်ဟာ အချိန်အခါမရွေး ရွှေလှေပေါ်ကို အချိန်မရွေး ထိုးစိုက်ကျရောက်နေတယ်။
ထုထည်ကြီးမားလှတဲ့ စေတီအဆောက်အအုံကြီးကို ပင်မအလယ်တိုင်မပါ၊ သံယက်မ မရှိပဲ ကျောက်တုံးကျောက်ခဲများနဲ့ သာတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ ပင်လယ်ရေဝင်ပေါက်၊ ထွက်ပေါက်နဲ့အလင်းရောင် ယူထားပုံက ရှေးဗိသုကာတွေရဲ့ လက်ရာဖြစ်တယ်။
ခမ်းနားဆန်းကြယ်တဲ့ ဌာပနာတိုက်ကို ကိုယ်တိုင် တွေ့မြင်ခဲ့ရတာဖြစ်လို့ နှောင်းလူတွေ သုတေသနပြုနိုင်အောင် ရွှေတိဂုံဂေါပကအဖွဲ့ကို မြေပုံဆွဲလို့ တင်ပြခဲ့တယ်။
ရွှေတိဂုံဂေါပကအဖွဲ့ကလည်း မစ္စတာအပရမေကို တွေ့ဆုံ မေးမြန်းပြီး ဌာပနာတိုက်တည်နေရာကို လိုက်လံပြသစေတဲ့အခါမှာ ဌာပနာတိုက် လှိုဏ်ဂူဟာ ရွှေတိဂုံရင်ပြင်တော် တနင်္ဂနွေထောင့်ရှိ ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားနဲ့ ဆုတောင်းပြည့်တန်ဆောင်း နေရာမှာ ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း နောက်တိုး တန်ဆောင်းတွေနဲ့ ဘုရားများ ထပ်မံ မွမ်းမံပြင်ဆင်ထားမှုကြောင့် အတိအကျပြသနိုင်ခြင်းမရှိပဲ ဆုတောင်းပြည့်စေတီရဲ့ လှိုဏ်ဂူအောက်မှာသာ ရှိတယ်လို့ ခန့်မှန်းညွှန်ပြ သွားနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မစ္စတာအပရမေ ကို လွစ္စလမ်း (ယခုဆိပ်ကမ်းသာလမ်း) အမှတ် (၂၅) မှာ ၁၈၉၅ ခုနှစ်က ဖွားမြင်ခဲ့တာပါ။ မိဘများမှာ မစ္စတာအက်စ်အပရမေ နဲ့ မစ္စက်ရိုစ်လူကပ်စ် တို့ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအမျိုးသမီး ဒေါ်သိန်းရွှေနဲ့အိမ်ထောင်ကျပြီး သားသမီး ၅ ယောက် ထွန်းကားခဲ့ကာ သားသမီးမြေးများနဲ့အတူ ဘောက်ထော်မှာ နေထိုင်တယ်လို့ သတင်းမှာ
မစ္စတာအပရမေ ကိုယနေ့ကြေးမုံက တွေ့ဆုံမြေးမြန်းပြီး ၁၃. ၃. ၆၈ နေ့မှာ ဖော်ပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းချိန်မှာ မစ္စတာအပရမေ ဟာ (၇၃) နှစ်ရှိပြီလို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ ရွှေတိဂုံဘုရားကြီးရဲ့အောက် ပေ (၆၀) ခန့်အကွာမှာ တည်ရှိတဲ့ ဆံတော်တွင်း ဌာပနာတိုက်ကြီးအကြောင်းကို နှောင်းလူများ သိရှိစေရန်ထပ်မံ ဖော်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဖူးမြော်ရခဲသော ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး၏ မြေအောက်ဋ္ဌာပနာ မြင်ကွင်းများ နှင့်ရွှေတိဂုံမှ အံ့ဖွယ်ကိုးပါး ။
ရွှေတိဂုံ စေတီတော် ကုန်းတော်ပေါ်တွင် ရွှေတိဂုံ ဘုရားကြီး မှလွဲလျှင် သူ့ထောင့်နှင့်သူ မွန်ဘုရင်များ၊ မြန်မာမင်းများ၊ မှူးမတ် စစ်သေနာပတိများ၊ ထွက်ရပ်လမ်း အားထုတ်သော ဘိုးဘိုးအောင်၊ ဓမ္မစေတီနှင့် တကွ ဘားမဲ့ဆရာတော်၊ ရှင်မထီး၊ ရှင်အဇ္ဖဂေါဏ စသော ပုဂ္ဂိုလ် အကျော်အမော်များ တည်ထား ကိုးကွယ်ခဲ့သည့် ဘုရားများစွာ ရှိနေပေသည်။
ရွှေတိဂုံ ဘုရား ကုန်းတော်ပေါ်ရှိ ထူးခြားသော အံ့ဖွယ် ၉-ဌနသို့ လှည့်ပြီး ပူဇော် အားထုတ်လေ့ ရှိကြသည်။ ထိုထူးခြား သော အံ့ဖွယ် ၉-ဌာနကို မန်လည်ဆရာတော် ဘုရားကြီးနှင့် တကွ ထင်ရှား ကျော်ကြားသော ဆရာတော်များလည်းလှည့် လည် ရှိခိုး ပူဇော်လေ့ ရှိတက်ကြ လေသည်။
ထို ထူးခြားသော အံ့ဖွယ် ၉-ဌာနမှာ
(၁) တ၀ဂူ ဆုတောင်းပြည့်ဘုရား (သို့) ပတ္တမြားမျက်ရှင်ဘုရား။
ရွှေတိဂုံ စေတီတော် အထက် ပစ္စယံ အရှေ့ဘက် တည့်တည့်တွင် တည်ရှိသည်။ ထိုတ၀ဂူ ဘုရားသို့ အမျိုးသားများ သာလျှင် တက်ရောက် ဖူးမြော်ခွင့် ရပြီး၊ အမျိုးသမီးများ
မဖူးမြော် နိုင်သော ဘုရားဟု ဆိုလျှင် မှားမည် မဟုတ်ပေ။ တ၀ဂူ ပတ္တမြား မျက်ရှင် ဘုရား ဟုလည်း ခေါ်တွင်လေသည်။
ဆုတောင်းပြည့် တ၀ဂူု ဘုရားသည် အလွန် တန်ခိုးကြီးသည့် အတွက် ဆုတောင်း ပြည့်သည်ဟု အလွန် ယုံကြည်ကြသည်။ ရှေးအခါက မင်းညီမင်းသားများသည် တ၀ဂူ ဆုတောင်းပြည့် ဘုရား တက်ပြီး ဆုတောင်းဆုယူ ပြုလုပ်ကြသည်။ သစ္စာ အဓိဌာန် ပြုလုပ်ကြသည်။ ပြုလုပ်သည့် အတိုင်း အောင်
အချင်းချင်း သတ်ဖြတ်ပြီး နန်းရပ်ထီးဖြူ လုယူကြသည်။ ထီးနန်းအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ကြသည်။ သို့အတွက် အချင်းချင်း မသတ် ဖြတ်စေရန် ကြီးစဉ်ငယ်လိုက် မင်းလုပ်စေရန် အတွက် မင်းညီမင်းသားများ တ၀ဂူ ဆုတောင်းပြည့် ဘုရား မဖူးမြော်ရဟု ဘုရင်များက အမိန့်စာချွန်တော် ထုတ်ပြန်ခဲ့ရလေသည် ဟု မှတ်သားခဲ့ရဖူးပါသည်။
ထို့ကြောင့် တ၀ဂူ ဘုရားကို လူတိုင်း အလွယ်တကူ မဖူးမြော် နိုင်စေရန် ဆုမတောင်းနိုင်ကြစေရန် တ၀ဂူ ဘုရားကို အထက် ပစ္စယံ လူသူ အရောက်အပေါက် နည်း သော နေရာတွင် လျှို့ဝှက် တည်ထား ကိုးကွယ်ကြသည်ဟု ပြောသမှတ် ပြုကြပါသည်။
(ယခုအခါ ထိုဘုရားအား အမျိုးသားများ အနေဖြင့် စနေ တနင်္ဂနွေနှင့် ဥပုပ်နေ့များတွင် တက်ရောက် ဖူးမြော်နိုင်ပြီး အခြား သူများ အနေဖြင့် အောက်တွင် TV များ မှ
(၂) ဝိဇ္ဖာ ဇော်ဂျီ ဘုရား။
ရွှေတိဂုံ ကုန်းတော် ရင်ပြင်တော် စနေထောင့် တည့်တည့်တွင် တည်ရှိသည်။ စေတီငယ်ပေါ်တွင် ဇော်ဂျီရုပ်များ ပြုလုပ်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ လောကီ ပညာရပ် အစီ
အမံဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ဘုရားဟု သိရှိရလေသည်။
(၃) ဆုတောင်းပြည့် ဘုရား။
ရွှေတိဂုံ ရင်ပြင်တော် ရာဟုထောင့် သံတန်ဆောင်းကြီး နံဘေးတွင်တည်ရှိသည်။ အချို့ က ဘား လေးဘား ဘုရားဟု ခေါ် ကြသည်။ ရှင်စောပု စေတီ ဟုလည်းတွင်သည်။ ဘုရားအနီးတွင် စကားစိမ်း၊ စကားဝါ စသော စကားပင် လေးပင် ရှိသည်။
(၄) ရှင်မထီး ဘုရား။
ရွှေတိဂုံ ရင်ပြင်တော် တနင်္ဂနွေထောင့်ရှိ နောင်တော်ကြီး ဘုရား မြောက်ဘက် အာရုံခံတန်ဆောင်း (ရှင်မထီးတန်ဆောင်း) တွင်းရှိ ဘုရားဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀-ခန့်က ရှင်မထီးဆရာတော် တည်သွားသည် ဟု ပြောသည်။
(၅) ရှင် အဇ္ဖဂေါဏ ဘုရား။
ရွှေတိဂုံ ဘုရား ရင်ပြင်တော် တနင်္ဂနွေထောင့်ရှိ နောင်တော်ကြီး ဘုရား၏ တောင်ဘက် အာရုံခံ တန်ဆောင်းတွင်း ရုပ်ပွားတော် ဖြစ်သည်။ ရှင် အဇ္ဖဂေါဏကား ဆိတ်မျက်လုံး တစ်ဖက်၊ နွားမျက်လုံး တစ်ဖက် ရှိသော ကိုယ်တော်ဟု ထင်ရှားသည်။ အဂ္ဂိရပ် တန်ခိုးဖြင့် ပုဂံခေတ်က ရွှေမိုး ငွေမိုး ရွာအောင် စောင်မခဲ့သော ကိုယ်တော်ဟု ရှေးဟောင်းသမိုင်း စာပေ တို့တွင် ဆို၏။
ဆရာတော်က ၄င်းတည်ခဲ့မှန်း လူများ သိစေရန် မျက်လုံး
တော် တစ်ဖက်ကျဉ်း၊ တစ်ဖက်ကျယ် ထုလုပ်သွားကြောင်း အဆိုရှိသည်။ ထို အာရုံခံတန်ဆောင်း ရာဟုထောင့် (ဝါ) အနောက်မြောက်ထောင့်ရှိ ရုပ်ပွါးတော်မှာ မျက်လုံးတော် တစ်ဖက်ကျဉ်း၊ တစ်ဖက်ကျယ် အရွယ်ချင်း မတူအောင် ပြုလုပ်ထားလေသည်။
(၆) ဆံတော်တွင်း ရုပ်ပွားတော်။
ရွှေတိဂုံ ရင်ပြင်တော် မြောက်ဘက်တွင် ရှိသော ဆံတော်တွင်း တန်ဆောင်း အတွင်းတွင် တည်ရှိသည်။ ဆံတောင်တွင်း တန်ဆောင်းမှာ ဒဂုံခင်ခင်လေး၏ ကောင်းမှု ဖြစ်သော မဟာဗောဓိ စေတီ၏ အနောက်ဘက် မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် တည်ရှိသည်။
ရွှေတိဂုံ စေတီကို တည်စဉ်က ဆံတော်များ ဆေးကြောသည့် တွင်း ဖြစ်သည်ဟု မှတ်သားကြလေသည်။ တန်ဆောင်းတွင်း ရုပ်ပွားတော် အနောက်တွင် ယခင် နှစ်ပေါင်း (၅၀)ကျော်က ဆံတော်တွင်းသို့ဆင်းရာ ဥမင် လိုဏ်ခေါင်း ရှိသည်ဟု ပြောစမှတ်ရှိသည်။
ဆံတော်တွင်းမှ ရေသည် ဧရာဝတီမြစ်ရေနှင့် တစ်ကြောတည်း ဖြစ်သဖြင့် ဒီရေအတက်အကျ ရှိတိုင်း ဆံတော်တွင်းတွင်လည်း အတက်အကျ ရှိသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ဆံတော်တွင်း အုတ်ပြသာဒ်ကို ငုံပြီး ၁၈၇၉ ခုနှစ်ကတန်ဆောင်း ဆောက်လုပ်ခဲ့လေသည်။
(၇) ဘိုးဘိုးအောင် ဘုရား။
ရွှေတိဂုံ စေတီတော် အရှေ့မုခ် အနီးရှိ ဘိုးဘိုးအောင် တန်ဆောင်း ဘုရားပင်ဖြစ်သည်။ ထိုတန်ဆောင်း အတွင်းရှိ ရုပ်ပွားတော်ကို ဘိုးဘိုးအောင် တည်ရစ်သည်ဟု ပြောစမှတ်
ရှိသည်။ ဘိုးဘိုးအောင် တန်ဆောင်း အနောက်ဘက်တွင် ကျောချင်း ကပ်လျှက် ရှိသည်ကား ဓမ္မစေတီ၏ ကောင်းမှုတော် စေတီ ဖြစ်သည်။ ဓမ္မစေတီ ဘုရားရှေ့တွင် ခြင်္သေ့နှင့် ကျားရုပ် ရှိသည်။
(၈) လက်ပက်လက် ဘုရား။
ရွှေတိဂုံ စေတီတော် အရှေ့မုခ် အာရုံခံ တန်ဆောင်း အတွင်းတွင် ရှိ၏။ ကကုသန် ရုပ်ပွားတော် ဖြစ်သည်။လိုဏ် အတွင်းရှိ ကကုသတ် ဘုရားရှင် ရုပ်ပွားတော်၏ လက်ယာဘက် လက်တော်မှာ အခြား ဘုရားများ ထုစဉ်ကဲ့သို့ လက်မှောက်ခုံ မဟုတ်ဘဲ လက်တော် ပက်လက် ထားပြီး ထုထားသဖြင့် လက်ပက်လက် ဘုရားဟုခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိလေသည်။
(၉) ပြဒါးရှင် ဘုရား။
ရွှေတိဂုံ ရင်ပြင်တော် အရှေ့မုခ်နှင့် အင်္ဂါထောင့် အကြားရှိ စေတီ တစ်ဆူ၏ တောင်ဘက်မုခ် အတွင်းရှိ ကြေး ဆင်းတုတော် ဖြစ်သည်။ အလွန် အချိုးအစား ကျန ပြေပြစ်
လှသည်။ နဖူးတော်တွင် မို့မောက် နေပြီး ပြဒါးရှင်လုံး ဌာပနာ ထားသည်ဟု ပြောစမှတ်ရှိ၏။
ပြဒါးရှင်လုံး ရှိသည် မရှိသည်ကား အသေအချာ မသိရသော်လည်း အဆိုပါကြေး ဆင်းတုတော်မှာ ရွှေတိဂုံ ကုန်းတော်ပေါ်ရှိ ဆင်းတုတော်များ အနက် အလွန် ကြည်ညိုဖွယ် ကောင်းလှသော ဆင်းတုတော် ဖြစ်ကြောင်းကို ဖူး ဘူး သူတိုင်း ၀န်ခံရပေ
တဈခါ ကွုံဖူးရုံ ဖွငျ့ တဈသကျတာ မမနေို့ငျအောငျ ကွောကျမကျဖှယျ ကောငျးလှနျးတဲ့ ဘီလူးစီးခွငျး အကွောငျး
ဘီ လူး စီး ခွငျး ဆို သညျ မှာ ကိုယျ တိုငျ မ ကွုံ ဖူး ရငျ တောငျ လူ တိုငျး ကွား တော့ ကွား ဖူးလိမျ့ မယျ ထငျ ပါ တယျ ပ ရိ သတျ ကွီး ရေ…. ။ လူ က နိုး နေ ရကျ နှငျ့ ခွေ တှလေကျ တှေ လှုပျ မ ရ ၊ အျော မ ရ ဟဈ မ ရ နဲ့ အ တျော ကွီး ကို စိတျဒုကျ ခ ရောကျ ရ တဲ့ အ ခြိနျ ကို ဆို လို တာ ပါ… ။
အ င်ျဂ လိပျ လို ( Sleep Paralysis ) လို့ ချေါ ပွီး မွနျ မာ လို ဘီ လူးစီး တယျ လို့ ချေါ တဲ့အ ခွေ အ နေ တဈ ရပျ ကို တဈ ခါ လောကျ ကွုံ ဖူး သှား တာ နှငျ့ နောကျ ထပျ ဘယျ တော့ မှ မတှေ့ ကွုံ ခငျြ တော့ လောကျ အောငျ ပငျ ဆိုး ရှား တဲ့ ကိ စ်စ တဈ ရပျ ပဲ ဖွဈ ပါ တယျ … ။
စိတျ ပ ညာ အ ရ ” Sleep Paralysis ” ကို နှဈ မြိုး ခှဲ ခွား နိုငျ ပါ တယျ.. ။ ” Isolated Sleep Paralysis (ISP) ” နှငျ့ ” Recurrent Isolated Sleep Paralysis ( RISP ) ” ဆို ပွီး ဖွဈ ပါတယျ… ။
အ လှယျ ပွော ရ ရငျ ISP ဆို သညျ မှာ လူ တိုငျး ဖွဈ နိုငျ ပေ မယျ့ RISP ဆို တာက တော့ အိပျ စကျ ခွငျး နှငျ့ သကျ ဆိုငျ သော မူ မ မှနျ သညျ့ ရော ဂါ တဈ မြိုး မြိုး ရှိ နေ သူ တှမှော သာ ပို ဖွဈ တတျ ပါ တယျ.. . ။
ဘီ လူး စီး တာ ဘာ ဖွဈ လို့ ဖွဈ ရ တာ လဲ ဆို တာ ကို ဖွေ ရှငျး ဖို့ က တော့ အ တျော လကျ ဝငျ တဲ့ ကိ စ်စ ရပျ တဈ ခု လို့ ဆို ရ မှာ ပါ ပဲ…. ။ ဒါ ပေ မယျ့ လညျး ဘာ ကွောငျ့ လညျး ဆို တဲ့ အ ဖွေ အ တိ အ ကြ တော့ မ ရှိ ဘဲ သီ အို ရီ သ ဘော တ ရား အ ရ ပဲ ရှိ ပါ သေး တယျ…. ။
အ ဓိ က က တော့ လေ ဝငျ လေ ထှကျ မ ကောငျး တာ မြိုး ၊ ကာ ဘှနျ ဒိုငျ အောကျ ဆိုကျ ဒျ အ ရမျး မြား နေ တဲ့ အ ခနျး ထဲ မှာ အိပျ တာ မြိုး ဆို ရငျ ပို ဖွဈ ဖို့ လှယျ ကူ ပါ တယျ… ။
ဘီလူးစီးတာ ဘာဖွဈလို့ဖွဈရတာလဲဆိုတာကို ဖွရှေငျးဖို့ကတော့ အတျောလကျဝငျတဲ့ ကိစ်စရပျတဈခုလို့ဆိုရမှာပါပဲ….။ဒါပမေယျ့လညျး ဘာကွောငျ့လညျးဆိုတဲ့ အဖွအေတိအကတြော့မရှိဘဲ သီအိုရီသဘောတရားအရပဲရှိပါသေးတယျ….။ အဓိကကတော့
လဝေငျလထှေကျမကောငျးတာမြိုး၊ ကာဘှနျဒိုငျအောကျဆိုကျဒျ အရမျးမြားနတေဲ့အခနျးထဲမှာအိပျတာမြိုးဆိုရငျ ပိုဖွဈဖို့လှယျကူပါတယျ…။ ဘီလူးစီးခွငျး “Sleep paralysis” က အသကျအန်တရာယျဖွဈလောကျအောငျ ဒုက်ခမပေးနိုငျပမေယျ့ ခံစားခဲ့ရတဲ့သူအတှကျတော့တဈသကျတာမမနေို့ငျအောငျ ကွောကျမကျဖှယျကောငျးလှနျးပါတယျ…။
ဘီလူးစီးတာဟာ အိပျမပြျောတဲ့သူတှေ၊ အိပျခြိနျမမှနျတဲ့သူတှေ၊ ပကျလကျအိပျတတျသူတှေ၊ ဖိအားမြားလှနျးတဲ့သူတှေ၊ အရမျးကိုပငျပနျးနှမျးနယျနတေဲ့သူတှေ၊ ဆေးသုံးတဲ့သူတှမှော ပိုဖွဈနိုငျပါတယျ။
ဒီနရောမှာတော့ရှေးခတျေ လူကွီးတှေ ပကျလကျမအိပျနဲ့လို့ ပွောခဲ့တာက အခုသိပ်ပံနညျးကြ ရှငျးတဲ့အခါမှာလညျး အငျမတနျမှနျနတောကို သှားတှရေ့မှာပါ..။ပကျလကျအိပျတဲ့အခါမှာ ခန်ဓာကိုယျအနအေထားကွောငျ့ လြှာ ဒါမှမဟုတျ အာခေါငျပြော့တို့ရဲ့ဖိအားကွောငျ့ အသကျရှူလမျးကွောငျးပိတျပွီးလသေိပျမဝငျတော့တဲ့အခါ ဘီလူးစီးတာဖွဈပျေါလာနိုငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ဘီ လူး စီး ခြင်း ဆို သည် မှာ ကိုယ် တိုင် မ ကြုံ ဖူး ရင် တောင် လူ တိုင်း ကြား တော့ ကြား ဖူးလိမ့် မယ် ထင် ပါ တယ် ပ ရိ သတ် ကြီး ရေ…. ။ လူ က နိုး နေ ရက် နှင့် ခြေ တွေလက် တွေ လှုပ် မ ရ ၊ အော် မ ရ ဟစ် မ ရ နဲ့ အ တော် ကြီး ကို စိတ်ဒုက် ခ ရောက် ရ တဲ့ အ ချိန် ကို ဆို လို တာ ပါ… ။
အ င်္ဂ လိပ် လို ( Sleep Paralysis ) လို့ ခေါ် ပြီး မြန် မာ လို ဘီ လူးစီး တယ် လို့ ခေါ် တဲ့အ ခြေ အ နေ တစ် ရပ် ကို တစ် ခါ လောက် ကြုံ ဖူး သွား တာ နှင့် နောက် ထပ် ဘယ် တော့ မှ မတွေ့ ကြုံ ချင် တော့ လောက် အောင် ပင် ဆိုး ရွား တဲ့ ကိ စ္စ တစ် ရပ် ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် … ။
စိတ် ပ ညာ အ ရ ” Sleep Paralysis ” ကို နှစ် မျိုး ခွဲ ခြား နိုင် ပါ တယ်.. ။ ” Isolated Sleep Paralysis (ISP) ” နှင့် ” Recurrent Isolated Sleep Paralysis ( RISP ) ” ဆို ပြီး ဖြစ် ပါတယ်… ။
အ လွယ် ပြော ရ ရင် ISP ဆို သည် မှာ လူ တိုင်း ဖြစ် နိုင် ပေ မယ့် RISP ဆို တာက တော့ အိပ် စက် ခြင်း နှင့် သက် ဆိုင် သော မူ မ မှန် သည့် ရော ဂါ တစ် မျိုး မျိုး ရှိ နေ သူ တွေမှာ သာ ပို ဖြစ် တတ် ပါ တယ်.. . ။
ဘီ လူး စီး တာ ဘာ ဖြစ် လို့ ဖြစ် ရ တာ လဲ ဆို တာ ကို ဖြေ ရှင်း ဖို့ က တော့ အ တော် လက် ဝင် တဲ့ ကိ စ္စ ရပ် တစ် ခု လို့ ဆို ရ မှာ ပါ ပဲ…. ။ ဒါ ပေ မယ့် လည်း ဘာ ကြောင့် လည်း ဆို တဲ့ အ ဖြေ အ တိ အ ကျ တော့ မ ရှိ ဘဲ သီ အို ရီ သ ဘော တ ရား အ ရ ပဲ ရှိ ပါ သေး တယ်…. ။
အ ဓိ က က တော့ လေ ဝင် လေ ထွက် မ ကောင်း တာ မျိုး ၊ ကာ ဘွန် ဒိုင် အောက် ဆိုက် ဒ် အ ရမ်း များ နေ တဲ့ အ ခန်း ထဲ မှာ အိပ် တာ မျိုး ဆို ရင် ပို ဖြစ် ဖို့ လွယ် ကူ ပါ တယ်… ။
ဘီလူးစီးတာ ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာကို ဖြေရှင်းဖို့ကတော့ အတော်လက်ဝင်တဲ့ ကိစ္စရပ်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါပဲ….။ဒါပေမယ့်လည်း ဘာကြောင့်လည်းဆိုတဲ့ အဖြေအတိအကျတော့မရှိဘဲ သီအိုရီသဘောတရားအရပဲရှိပါသေးတယ်….။ အဓိကကတော့
လေဝင်လေထွက်မကောင်းတာမျိုး၊ ကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဒ် အရမ်းများနေတဲ့အခန်းထဲမှာအိပ်တာမျိုးဆိုရင် ပိုဖြစ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်…။ ဘီလူးစီးခြင်း “Sleep paralysis” က အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်လောက်အောင် ဒုက္ခမပေးနိုင်ပေမယ့် ခံစားခဲ့ရတဲ့သူအတွက်တော့တစ်သက်တာမမေ့နိုင်အောင် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလွန်းပါတယ်…။
ဘီလူးစီးတာဟာ အိပ်မပျော်တဲ့သူတွေ၊ အိပ်ချိန်မမှန်တဲ့သူတွေ၊ ပက်လက်အိပ်တတ်သူတွေ၊ ဖိအားများလွန်းတဲ့သူတွေ၊ အရမ်းကိုပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့သူတွေ၊ ဆေးသုံးတဲ့သူတွေမှာ ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာတော့ရှေးခေတ် လူကြီးတွေ ပက်လက်မအိပ်နဲ့လို့ ပြောခဲ့တာက အခုသိပ္ပံနည်းကျ ရှင်းတဲ့အခါမှာလည်း အင်မတန်မှန်နေတာကို သွားတွေ့ရမှာပါ..။ပက်လက်အိပ်တဲ့အခါမှာ ခန္ဓာကိုယ်အနေအထားကြောင့် လျှာ ဒါမှမဟုတ် အာခေါင်ပျော့တို့ရဲ့ဖိအားကြောင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်ပြီးလေသိပ်မဝင်တော့တဲ့အခါ ဘီလူးစီးတာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တဈခါတုနျးက ကောငျမလေးတဈယောကျသူ့အဘှားအိမျသှားဖို့ဆိုပွီး လယျကနျသငျးရိုးလမျးအတိုငျး လြှောကျလာနတေုနျး ရှောကနဲအသံကွားတော့ ငုံ့ကွညျ့လိုကျတယျ ခွထေောကျနားမှာ မွှတေဈကောငျ.
မွှကေ ခလောကျဆှဲမွှအေမြိုးအစားအဲ့ဒီအခြိနျမှာ ကောငျမလေးက ဘာမှမလုပျရသေးခငျမွှကေ ကောငျမလေးကိုပွောပါတယျ…
ဒီနရောမှာ အရမျးအေးတာပဲတဲ့အခုထိ ဘာမှလညျး မစားရသေးဘူးတဲ့ဖွဈနိုငျရငျ သူ့ကို ကောငျမလေးရဲ့အင်ျကြီထဲထညျ့ပွီး
ကောငျမလေးနဲ့အတူ ချေါသှားပါလားတဲ့ လုပျရော…
ကောငျမလေးက ပွနျပွောတယျမဖွဈဘူး မဖွဈဘူး…နငျဘာမွှလေဲဆိုတာ ငါသိတယျ နငျက ခလောကျဆှဲမွှေ…ငါ နငျ့ကို ချေါသှားရငျ နငျ ငါ့ကိုကိုကျမှာ…နငျက အဆိပျပွငျးတယျ…
မွှကေ ကောငျမလေးပွောတာကို လကျမခံဘူးမကိုကျဘူး…မကိုကျဘူး…စိတျခနြငျသာ ငါ့ကိုကူညီရငျ…ငါဟာ နငျ့သူငယျခငျြးကောငျးပဲ နငျ့ကိုငါ ကောငျးကောငျးမှနျမှနျ တကယျဆကျဆံမှာ…
မွှကေ ဒီလိုပွောလာတော့ ကောငျမလေး တှသှေားတယျ ပွီးတော့ မွှကေိုကွညျ့တယျ မွှကေ လှလိုကျတာ သူ့အကှကျလေးတှကေ ပနျးခြီကားတဈခပျြလိုပဲငါမွငျဖူးသမြှ မွှတှေထေဲမှာ သူအလှဆုံးပဲ…
ကောငျမလေး ခကျြခငျြးပဲ ဆုံးဖွတျလိုကျတယျကောငျးပွီ နငျ့ကို ငါယုံတယျ…နငျ့ကို ငါကယျမယျ ဘယျလိုသကျရှိသတ်တဝါမဆို ကွငျနာမှုနဲ့ ထိုကျတနျတယျဆိုတာ ငါလကျခံယုံကွညျထားတယျ…
ပွောပွောဆိုဆိုနဲ့ ကောငျမလေးက မွှကေိုညငျညငျသာသာနဲ့ ယူပွီး အင်ျကြီအောကျထဲထညျ့လို့ သူ့အဘှားအိမျကို ဆကျထှကျလာခဲ့တယျ…
လြှောကျလာရငျး…လြှောကျလာရငျးနဲ့ကောငျမလေး ပွငျးထနျတဲ့ နာကငျြမှုတဈခုကိုခံစားလိုကျရတယျ…မွှကေ သူ့ကို ကိုကျလိုကျပါပွီ…
ကောငျမလေးငိုတယျ…နောငျတရတယျနငျ ငါ့ကို ဘယျလိုလုပျလိုကျတာလဲဟငျနငျပွောတော့ ငါ့ကိုမကိုကျဘူးဆို…ငါ နငျ့ကို ယုံခဲ့တယျလေ…
မွှကေ တဈခှနျးပဲပွနျပွောပါတယျနငျ ငါ့ကို ချေါသှားဖို့ ဆုံးဖွတျကတညျးကငါဘယျလိုအမြိုးအစားလဲဆိုတာ နငျသိပွီးသားပဲ
မတတျနိုငျဘူးလေ…နငျ့ထိုကျနဲ့ နငျ့ကံပေါ့ဒီလိုပွောပွီး အမွီးလေးကို ခလောကျလို့တှနျ့တှနျ့တှနျ့တှနျ့နဲ့ ထှကျသှားပါတော့တယျ…
ပုံပွငျထဲက မွှလေို ကကျြသရတေုံးတဲ့လူသားတှကေို ကြှနျပျတို့ အတျောမြားမြားကိုပတျဝနျးကငျြမှာကွုံဖူးကွမယျထငျပါတယျ…
တခြို့လူတှကေ သှားသနားလို့ မရပါဘူး တခြို့လူတှကေ လြှာနှဈခှနဲ့ ခုနက မွှလေိုပါပဲတခြို့လူတှကေတော့ ခှေးမွီးကောကျ ကညျြတောကျစှပျတှပေါ တခြို့လူတှကေ ခုတဈမြိုး တျောကွာတဈမြိုးပါပဲ တခြို့လူတှကေ အယုံသှငျးပွီးမှ ယုတျမာတတျပါသေးတယျတခြို့လူတှကေ မူယာမာယာသိပျမြားပါတယျ
ဒီတော့ လူတိုငျးက သနားကမားရုပျနဲ့ မကျြရညျခံထိုးတိုငျးသနားစရာမကောငျးဘူးဆိုတာကိုလညျး ခေါငျးထဲထညျ့ထားရပါမယျ.
အပျေါယံရှမှေုံကွဲထားတဲ့မကျြနှာစာတှနေဲ့လညျးသူတို့ရဲ့အတှငျးစိတျသန်တာနျတှကေိုခဏတာအားဖွငျ့ ပွညျဖုံးကားခထြားလို့ရတယျဆိုတာကိုလညျး စှဲမှတျထားရပါမယျ.
တခြို့(တခြို့) သော သူတှဟောဘယျလိုသနားကွငျနာမှုမြိုး…စတေနာထားမှုမြိုးယုံကွညျမှုမြိုး…ကိုးစားမှုမြိုးနဲ့မှ
မထိုကျတနျဘူးဆိုတာကို လညျး နားလညျထားဖို့ လိုအပျပါတယျ..
တစ်ခါတုန်းက ကောင်မလေးတစ်ယောက်သူ့အဘွားအိမ်သွားဖို့ဆိုပြီး လယ်ကန်သင်းရိုးလမ်းအတိုင်း လျှောက်လာနေတုန်း ရှောကနဲအသံကြားတော့ ငုံ့ကြည့်လိုက်တယ် ခြေထောက်နားမှာ မြွေတစ်ကောင်.
မြွေက ခလောက်ဆွဲမြွေအမျိုးအစားအဲ့ဒီအချိန်မှာ ကောင်မလေးက ဘာမှမလုပ်ရသေးခင်မြွေက ကောင်မလေးကိုပြောပါတယ်…
ဒီနေရာမှာ အရမ်းအေးတာပဲတဲ့အခုထိ ဘာမှလည်း မစားရသေးဘူးတဲ့ဖြစ်နိုင်ရင် သူ့ကို ကောင်မလေးရဲ့အင်္ကျီထဲထည့်ပြီး
ကောင်မလေးနဲ့အတူ ခေါ်သွားပါလားတဲ့ လုပ်ရော…
ကောင်မလေးက ပြန်ပြောတယ်မဖြစ်ဘူး မဖြစ်ဘူး…နင်ဘာမြွေလဲဆိုတာ ငါသိတယ် နင်က ခလောက်ဆွဲမြွေ…ငါ နင့်ကို ခေါ်သွားရင် နင် ငါ့ကိုကိုက်မှာ…နင်က အဆိပ်ပြင်းတယ်…
မြွေက ကောင်မလေးပြောတာကို လက်မခံဘူးမကိုက်ဘူး…မကိုက်ဘူး…စိတ်ချနင်သာ ငါ့ကိုကူညီရင်…ငါဟာ နင့်သူငယ်ချင်းကောင်းပဲ နင့်ကိုငါ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် တကယ်ဆက်ဆံမှာ…
မြွေက ဒီလိုပြောလာတော့ ကောင်မလေး တွေသွားတယ် ပြီးတော့ မြွေကိုကြည့်တယ် မြွေက လှလိုက်တာ သူ့အကွက်လေးတွေက ပန်းချီကားတစ်ချပ်လိုပဲငါမြင်ဖူးသမျှ မြွေတွေထဲမှာ သူအလှဆုံးပဲ…
ကောင်မလေး ချက်ချင်းပဲ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကောင်းပြီ နင့်ကို ငါယုံတယ်…နင့်ကို ငါကယ်မယ် ဘယ်လိုသက်ရှိသတ္တဝါမဆို ကြင်နာမှုနဲ့ ထိုက်တန်တယ်ဆိုတာ ငါလက်ခံယုံကြည်ထားတယ်…
ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ကောင်မလေးက မြွေကိုညင်ညင်သာသာနဲ့ ယူပြီး အင်္ကျီအောက်ထဲထည့်လို့ သူ့အဘွားအိမ်ကို ဆက်ထွက်လာခဲ့တယ်…
လျှောက်လာရင်း…လျှောက်လာရင်းနဲ့ကောင်မလေး ပြင်းထန်တဲ့ နာကျင်မှုတစ်ခုကိုခံစားလိုက်ရတယ်…မြွေက သူ့ကို ကိုက်လိုက်ပါပြီ…
ကောင်မလေးငိုတယ်…နောင်တရတယ်နင် ငါ့ကို ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲဟင်နင်ပြောတော့ ငါ့ကိုမကိုက်ဘူးဆို…ငါ နင့်ကို ယုံခဲ့တယ်လေ…
မြွေက တစ်ခွန်းပဲပြန်ပြောပါတယ်နင် ငါ့ကို ခေါ်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ကတည်းကငါဘယ်လိုအမျိုးအစားလဲဆိုတာ နင်သိပြီးသားပဲ
မတတ်နိုင်ဘူးလေ…နင့်ထိုက်နဲ့ နင့်ကံပေါ့ဒီလိုပြောပြီး အမြီးလေးကို ခလောက်လို့တွန့်တွန့်တွန့်တွန့်နဲ့ ထွက်သွားပါတော့တယ်…
ပုံပြင်ထဲက မြွေလို ကျက်သရေတုံးတဲ့လူသားတွေကို ကျွန်ပ်တို့ အတော်များများကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာကြုံဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်…
တချို့လူတွေက သွားသနားလို့ မရပါဘူး တချို့လူတွေက လျှာနှစ်ခွနဲ့ ခုနက မြွေလိုပါပဲတချို့လူတွေကတော့ ခွေးမြီးကောက် ကျည်တောက်စွပ်တွေပါ တချို့လူတွေက ခုတစ်မျိုး တော်ကြာတစ်မျိုးပါပဲ တချို့လူတွေက အယုံသွင်းပြီးမှ ယုတ်မာတတ်ပါသေးတယ်တချို့လူတွေက မူယာမာယာသိပ်များပါတယ်
ဒီတော့ လူတိုင်းက သနားကမားရုပ်နဲ့ မျက်ရည်ခံထိုးတိုင်းသနားစရာမကောင်းဘူးဆိုတာကိုလည်း ခေါင်းထဲထည့်ထားရပါမယ်.
အပေါ်ယံရွှေမှုံကြဲထားတဲ့မျက်နှာစာတွေနဲ့လည်းသူတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်သန္တာန်တွေကိုခဏတာအားဖြင့် ပြည်ဖုံးကားချထားလို့ရတယ်ဆိုတာကိုလည်း စွဲမှတ်ထားရပါမယ်.
တချို့(တချို့) သော သူတွေဟာဘယ်လိုသနားကြင်နာမှုမျိုး…စေတနာထားမှုမျိုးယုံကြည်မှုမျိုး…ကိုးစားမှုမျိုးနဲ့မှ
မထိုက်တန်ဘူးဆိုတာကို လည်း နားလည်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်..
ပှစိပှစိလုပျတာကတော့ ဝါသနာပါ သူမြားကို ကူညီလိုကျလို့ ကိုယျ့မှာ သုညဖွဈသှား ခဲ့ရငျတောငျကိုယျကူညီလိုကျတဲ့သူ အဆငျပွနေတေယျဆိုရငျ ကွညျနူးပီတိ ဖွဈနတေတျတဲ့ သူတှပေါ။
နှုတျခမျးတဈဝိုကျ ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတှဟော တဈခါတဈလေ ကိုယျ့ကိုယျကို တောငျ ယုံကွညျဖို့ ခကျခဲနတေတျတယျ။
သူ့မှာ အတှေးအချေါကောငျးတှေ ရှိနတောတောငျ သူမြားစကားကို ယုံပွီး လကျခံတတျတဲ့အတှကျ အလုပျတဈခုကို
လုပျမယျဆိုရငျလညျး စဉျးစားနတောနဲ့ပဲ အခြိနျကုနျသှားတတျတယျ။
လုပျလိုကျတဲ့ ကိစ်စတဈခုဟာ အမြားအားဖွငျ့ ပွသနာဖွဈမယျ၊ဆုံးရှုးံမယျ ဆိုပွီး မကောငျးတဲ့ဘကျကပဲ အမြားအားဖွငျ့ တှေးလရှေိ့တယျ။
သူအမှားတဈခု လုပျမိပွီ ဆိုရငျလညျး နောငျတရမဆုံး ဖွဈနတေတျတာ နှုတျခမျးတဈဝိုကျ ”မှဲ့” ပါတဲ့ သူတှပေါနှုတျခမျးတဈဝိုကျ ”မှဲ့” ပါတဲ့
သူတှဟော သူတဈပါးအပျေါ မှာကတြော့ ဦးစားပေးတတျတယျ။ သနားတတျတယျ။
သဘောကပြွီး တဈယောကျတညျးပဲ ဖွဈနတေတျပါတယျ..နှုတျခမျးတဈဝိုကျ ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတှကေ ဒေါသကလညျး အရမျးကွီးတတျတယျ။
ဒါပမေယျ့ တျောရုံတနျရုံ စိတျမဆိုး တတျပါဘူး။
စိတျကလညျး အရမျးမွနျတယျ။ သူမှနျတယျ ထငျရငျ ဘယျသူ့ကိုမဆို ရငျဆိုငျရဲတယျ။ ဘာမဆို လုပျရဲတယျ။
ကိစ်စတဈခုကို လုပျခငျြပွီဆိုရငျလညျး ဇှတျလုပျတတျတယျ။ သူ့ကို မခံခငျြအောငျ၊ ဒေါသထှကျအောငျ မထိတထိ သှားလုပျတဲ့သူတှဆေို အရှဲ့ပွနျတိုကျရမှကို ကနြေပျတယျ။
စိတျတိုနပွေီဆိုရငျတော့ မကျြနှာထားက တငျးတငျးနဲ့ တဈလောကလုံး သူ့လုပျစာကိုပဲ ထိုငျစားနရေသလို
ဘယျသူနဲ့မှကို စကား မပွောခငျြတော့ဘူးနှုတျခမျးတဈဝိုကျ ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတှဟော သူမြားအပျေါမှာလညျး ကိုယျ့ သိက်ခာ အကခြံပွီးတော့ကို ကူညီပေးတတျတဲ့ သူတှပေါ။
နှုတျခမျးတဈဝိုကျ ”မှဲ့” ပါတဲ့ သူတှဟော ခဈြသူကို အရမျးခဈြသလောကျ မွတျနိုးသလောကျ ဂရုစိုကျသလောကျ
ကွငျနာ သလောကျ တှယျတာသလောကျ အလေးထားသလောကျ နားလညျမှု တှခှေငျ့လှတျမှုတှရှေိသလောကျ အမြားအားဖွငျ့
သူ့ခဈြသူအပျေါ သူပေးနိုငျသလောကျ ပွနျမရတတျကွပါဘူး။
ပွစိပွစိလုပ်တာကတော့ ဝါသနာပါ သူများကို ကူညီလိုက်လို့ ကိုယ့်မှာ သုညဖြစ်သွား ခဲ့ရင်တောင်ကိုယ်ကူညီလိုက်တဲ့သူ အဆင်ပြေနေတယ်ဆိုရင် ကြည်နူးပီတိ ဖြစ်နေတတ်တဲ့ သူတွေပါ။
သူများ အကြည့်တွေကိုလည်း သည်းမခံနိုင်သလို သူ့ကို သူများတွေက စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုထင်နေမလဲ ဆိုတာကို အမြဲ သိချင်နေသူတွေပါ။
နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတွေဟာ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တောင် ယုံကြည်ဖို့ ခက်ခဲနေတတ်တယ်။
သူ့မှာ အတွေးအခေါ်ကောင်းတွေ ရှိနေတာတောင် သူများစကားကို ယုံပြီး လက်ခံတတ်တဲ့အတွက် အလုပ်တစ်ခုကို
လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း စဉ်းစားနေတာနဲ့ပဲ အချိန်ကုန်သွားတတ်တယ်။
လုပ်လိုက်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဟာ အများအားဖြင့် ပြသနာဖြစ်မယ်၊ဆုံးရှုးံမယ် ဆိုပြီး မကောင်းတဲ့ဘက်ကပဲ အများအားဖြင့် တွေးလေ့ရှိတယ်။
နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတွေဟာ ငြိမ်းချမ်းခြင်းကို မြတ်နိုးသူတွေပါ။
သူအမှားတစ်ခု လုပ်မိပြီ ဆိုရင်လည်း နောင်တရမဆုံး ဖြစ်နေတတ်တာ နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့ သူတွေပါနှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့
သူတွေဟာ သူတစ်ပါးအပေါ် မှာကျတော့ ဦးစားပေးတတ်တယ်။ သနားတတ်တယ်။
သဘောကျပြီး တစ်ယောက်တည်းပဲ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်..နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတွေက ဒေါသကလည်း အရမ်းကြီးတတ်တယ်။
ဒါပေမယ့် တော်ရုံတန်ရုံ စိတ်မဆိုး တတ်ပါဘူး။
စိတ်ကလည်း အရမ်းမြန်တယ်။ သူမှန်တယ် ထင်ရင် ဘယ်သူ့ကိုမဆို ရင်ဆိုင်ရဲတယ်။ ဘာမဆို လုပ်ရဲတယ်။
ကိစ္စတစ်ခုကို လုပ်ချင်ပြီဆိုရင်လည်း ဇွတ်လုပ်တတ်တယ်။ သူ့ကို မခံချင်အောင်၊ ဒေါသထွက်အောင် မထိတထိ သွားလုပ်တဲ့သူတွေဆို အရွဲ့ပြန်တိုက်ရမှကို ကျေနပ်တယ်။
စိတ်တိုနေပြီဆိုရင်တော့ မျက်နှာထားက တင်းတင်းနဲ့ တစ်လောကလုံး သူ့လုပ်စာကိုပဲ ထိုင်စားနေရသလို
ဘယ်သူနဲ့မှကို စကား မပြောချင်တော့ဘူးနှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတွေဟာ သူများအပေါ်မှာလည်း ကိုယ့် သိက္ခာ အကျခံပြီးတော့ကို ကူညီပေးတတ်တဲ့ သူတွေပါ။
နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့ သူတွေဟာ ချစ်သူကို အရမ်းချစ်သလောက် မြတ်နိုးသလောက် ဂရုစိုက်သလောက်
ကြင်နာ သလောက် တွယ်တာသလောက် အလေးထားသလောက် နားလည်မှု တွေခွင့်လွှတ်မှုတွေရှိသလောက် အများအားဖြင့်
သူ့ချစ်သူအပေါ် သူပေးနိုင်သလောက် ပြန်မရတတ်ကြပါဘူး။
နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့ သူတွေဟာ တစ်ယောက်ဆို တစ်ယောက် ပိတောက်ဆို ပိတောက်ပါပဲ။
ကိုရငျလေးတဈပါး နှားနို့ ခိုးသောကျတာကွောငျ့ ရိုကျနှကျခံရပွီးနောကျ ပြံလှနျတျောမူသှားတယျလို့ သိရပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ဩဂုတျ (၂၄)ရကျနမှေ့ာ ကြောငျးရှိကိုရငျလေးတှဟော သနျ့ရှငျးရေးလုပျအပွီးမှာ သကျတျော
(၉)နှဈအရှယျ ကိုရငျလေးတဈပါးက နှားနို့ခိုးသောကျတာကွောငျ့ ဦးဇငျးတဈပါး ရိုကျနှကျဆုံးမပွီးနောကျ
ဒဏျရာတှကွေောငျ့ စကျတငျဘာ (၃)ရကျနမှေ့ာ ပြံလှနျတျောမူသှားတာဖွဈပါတယျ။
ကိုရငျလေးဟာ ဆယျခကျြကြျော အရိုကျခံခဲ့ရသလို အရိုကျခံရပွီးနောကျမှာလညျး ခေါငျးကိုကျပွီး
သုံးလေးရကျအကွာမှာတော့ လဖွေတျသလိုဖွဈကာ ခွထေောကျတှမေလှုပျနိုငျတော့ဘူးလို့ မိသားစုဝငျတှကေ ဆိုပါတယျ။
ကိုရငျလေးဟာ အရငျက အတကျရောဂါအခံရှိသူဖွဈပွီး မိဘနှဈပါးစလုံးကလညျး ထိုငျးနိုငျငံမှာရောကျရှိနတော ဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
ရိုကျနှကျခံရပွီးနောကျ ပြံလှနျတျောမူသှားတဲ့ ကိုရငျလေးနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ ဆရာတျောတှေ၊
ရပျရှာဥက်ကဌတှဟော ဆှေးနှေးမှုတဈစုံတဈရာ ပွုလုပျပေးတာ မရှိသေးဘူးလို့လညျး သိရပါတယျ။
ကိုရငျလေးရဲ့ မိသားစုဝငျတှကေတော့ ကိုရငျလေးကို အခုလို ညိုမဲအောငျ ရိုကျနှကျဆုံးမတာကို
မဖွဈသငျ့သလို ဆုံးမရငျလညျး အသကျအန်တရာယျဖွဈစနေိုငျမယျ့ ပွဈဒဏျမပေးသငျ့တဲ့အကွောငျးတှနေဲ့
ရိုကျနှကျဆုံးမခဲ့တဲ့ ဦးဇငျးဖွဈသူလညျး ဝနျခံစခေငျြတယျဆိုပွီး စိတျမကောငျးစှာပွောပွထားပါတယျ။
ကိုရင်လေးတစ်ပါး နွားနို့ ခိုးသောက်တာကြောင့် ရိုက်နှက်ခံရပြီးနောက် ပျံလွန်တော်မူသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ် (၂၄)ရက်နေ့မှာ ကျောင်းရှိကိုရင်လေးတွေဟာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်အပြီးမှာ သက်တော်
(၉)နှစ်အရွယ် ကိုရင်လေးတစ်ပါးက နွားနို့ခိုးသောက်တာကြောင့် ဦးဇင်းတစ်ပါး ရိုက်နှက်ဆုံးမပြီးနောက်
ဒဏ်ရာတွေကြောင့် စက်တင်ဘာ (၃)ရက်နေ့မှာ ပျံလွန်တော်မူသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရင်လေးဟာ ဆယ်ချက်ကျော် အရိုက်ခံခဲ့ရသလို အရိုက်ခံရပြီးနောက်မှာလည်း ခေါင်းကိုက်ပြီး
သုံးလေးရက်အကြာမှာတော့ လေဖြတ်သလိုဖြစ်ကာ ခြေထောက်တွေမလှုပ်နိုင်တော့ဘူးလို့ မိသားစုဝင်တွေက ဆိုပါတယ်။
ကိုရင်လေးဟာ အရင်က အတက်ရောဂါအခံရှိသူဖြစ်ပြီး မိဘနှစ်ပါးစလုံးကလည်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရိုက်နှက်ခံရပြီးနောက် ပျံလွန်တော်မူသွားတဲ့ ကိုရင်လေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဆရာတော်တွေ၊
ရပ်ရွာဥက္ကဌတွေဟာ ဆွေးနွေးမှုတစ်စုံတစ်ရာ ပြုလုပ်ပေးတာ မရှိသေးဘူးလို့လည်း သိရပါတယ်။
ကိုရင်လေးရဲ့ မိသားစုဝင်တွေကတော့ ကိုရင်လေးကို အခုလို ညိုမဲအောင် ရိုက်နှက်ဆုံးမတာကို
မဖြစ်သင့်သလို ဆုံးမရင်လည်း အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်မယ့် ပြစ်ဒဏ်မပေးသင့်တဲ့အကြောင်းတွေနဲ့
ရိုက်နှက်ဆုံးမခဲ့တဲ့ ဦးဇင်းဖြစ်သူလည်း ဝန်ခံစေချင်တယ်ဆိုပြီး စိတ်မကောင်းစွာပြောပြထားပါတယ်။
စီးပှားတကျမညျ့အိမျ ကိုယျယခုနထေိုငျနတေဲ့အိမျဟာ ဘယျအမြိုးအစားထဲ ပါနလေဲဆိုတာ လလေ့ာဆနျးစဈကွညျ့လိုကျရအောငျ
စီးပှားတကျမညျ့အိမျ ကိုယျယခုနထေိုငျနတေဲ့အိမျဟာ ဘယျအမြိုးအစားထဲ ပါနလေဲဆိုတာ လလေ့ာဆနျးစဈကွညျ့လိုကျရအောငျစီးပှားတတျမညျ့အိမျ။ ကိုယျယခုနထေိုငျနတေဲ့ အိမျဟာ ဘယျအမြိုးအစားထဲ ပါနလေဲဆိုတာလလေ့ာဆနျးစဈကွညျ့လိုကျရအောငျ။
အိမျ၏ ခေါငျးရငျးနအေိမျသညျ မိမိအိမျထကျမွငျ့မညျ………ခွရေငျးအိမျသညျလညျးမိမိအိမျထကျမွငျ့ပါက ကိုယျနသေောအိမျသညျ အမိုးနိမျ့နလြှေငျအိမျပုခကျ ဟုချေါသညျ ။
နသေောမိသားစုသညျ စီးပှားတကျ၏ ။
ကိုယျ့အိမျခေါငျးရငျးအိမျက အမိုးနိမျ့မညျ ။ကိုယျ့အိမျခွရေငျးကလဲ အမိုးနိမျ့မညျ ……ကိုယျ့အိမျက အလယျမှ အမိုးမွငျ့မားနပေါကအိမျမွငျ့မိုရျဟုချေါသညျ ။
လူကွီးမိဘတို့ကို ခေါငျးရငျးဘကျထား၍ပွူ စုလုပျကြှေးအား သဒ်ဓါပွညျ့ကအထူးကောငျးမှနျ၏ ။ကိုယျ့အိမျ၏ခေါငျးရငျးကမွငျ့မညျ ။
ကိုယျ့အိမျ၏ ခွရေငျးက ကိုယျ့အိမျထကျနိမျ့နပေါကအိမျတောငျတနျးဟုချေါသညျ ။တဈစိမျ့စိမျ့စီးပှားဖွဈ၏ ။
ကိုယျ့အိမျ၏ခေါငျးရငျးကနိမျ့၍ကိုယျ့အိမျ၏ ခွရေငျးအိမျက မွငျ့နပေါကစီးပှားအသညျးအသနျရှာရတတျသညျ ။
ရဆေနျအိမျဟုချေါသညျ ။ရှေးလူကွီးမြားက မဝယျသငျ့ဟုဆိုကွ၏ ။
ကိုယျ့အိမျ၏ ခေါငျးရငျးနားတှငျ မီးဖိုအကွီးကွီးဖွငျ့စီးပှားရှာသောအိမျရှိနပေါက ထိုအိမျကိုဘုရားဆောငျရှခွေ့ငျးသို့မဟုတျအိမျအမိုးထပျမွှငျ့ခွငျးပွု အပျ၏ ။
မကနျြးမမာဖွဈတတျ၏ ။ဦးခေါငျး အပူတိုကျဟုချေါကွသညျ ။သတိထားအပျ၏ ။
ကိုယျ့အိမျ၏ ဘေးဘယျညာအိမျတို့မှဆူညံစကား ပွငျးသောအသံခြဲ့စကျဆောငျးဘောကျဈအသံအဆဲအဆိုနူတျကွမျးတမျးခွငျးပွုလုပျနပေါကထိုအိမျသညျ နတျဆိုးလှညျးအိမျဟုချေါသညျ ။
အမင်ျဂလာအသံကွားတှငျညပျနေ၍ဖွဈ၏ ။မတ်ေတသုတျ မပွတျသရဇ်ဈယျအပျ၏ ။
အလှနျစပျစပျစုစုနိူငျသော အိမျနီးပါးခငျြးငှအေခြေးအငှားအလှနျပကျစကျ၍ပွနျဆပျလြှငျလကျအလှနျခကျသောသူတို့နှငျ့နထေိုငျရပါကမရှိပါ ဟူသောစကားကိုလိမျညာပွောတတျရ၍သီလ မလုံသောကံကို စီရငျဖနျတီးမိနတေတျ၍အလိမ်မာဖွငျ့ ဝစီကံထိမျးထိမျးသိမျးသိမျးသတိထားပွောရတတျ၏။
ဝစီဗဒေထိတိုငျးရှ ဟူသညျနှငျ့အညီကိုယျပါ ဆငျးရဲနှမျးပါးလာတတျ၏
စီးပွားတက်မည့်အိမ် ကိုယ်ယခုနေထိုင်နေတဲ့အိမ်ဟာ ဘယ်အမျိုးအစားထဲ ပါနေလဲဆိုတာ လေ့လာဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ရအောင်စီးပွားတတ်မည့်အိမ်။ ကိုယ်ယခုနေထိုင်နေတဲ့ အိမ်ဟာ ဘယ်အမျိုးအစားထဲ ပါနေလဲဆိုတာလေ့လာဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
အိမ်၏ ခေါင်းရင်းနေအိမ်သည် မိမိအိမ်ထက်မြင့်မည်………ခြေရင်းအိမ်သည်လည်းမိမိအိမ်ထက်မြင့်ပါက ကိုယ်နေသောအိမ်သည် အမိုးနိမ့်နေလျှင်အိမ်ပုခက် ဟုခေါ်သည် ။
နေသောမိသားစုသည် စီးပွားတက်၏ ။
လူကြီးမိဘတို့ကို ခေါင်းရင်းဘက်ထား၍ပြူ စုလုပ်ကျွေးအား သဒ္ဓါပြည့်ကအထူးကောင်းမွန်၏ ။ကိုယ့်အိမ်၏ခေါင်းရင်းကမြင့်မည် ။
ကိုယ့်အိမ်၏ ခြေရင်းက ကိုယ့်အိမ်ထက်နိမ့်နေပါကအိမ်တောင်တန်းဟုခေါ်သည် ။တစ်စိမ့်စိမ့်စီးပွားဖြစ်၏ ။
ကိုယ့်အိမ်၏ခေါင်းရင်းကနိမ့်၍ကိုယ့်အိမ်၏ ခြေရင်းအိမ်က မြင့်နေပါကစီးပွားအသည်းအသန်ရှာရတတ်သည် ။
ရေဆန်အိမ်ဟုခေါ်သည် ။ရှေးလူကြီးများက မဝယ်သင့်ဟုဆိုကြ၏ ။
ကိုယ့်အိမ်၏ ခေါင်းရင်းနားတွင် မီးဖိုအကြီးကြီးဖြင့်စီးပွားရှာသောအိမ်ရှိနေပါက ထိုအိမ်ကိုဘုရားဆောင်ရွှေ့ခြင်းသို့မဟုတ်အိမ်အမိုးထပ်မြှင့်ခြင်းပြု အပ်၏ ။
မကျန်းမမာဖြစ်တတ်၏ ။ဦးခေါင်း အပူတိုက်ဟုခေါ်ကြသည် ။သတိထားအပ်၏ ။
ကိုယ့်အိမ်၏ ဘေးဘယ်ညာအိမ်တို့မှဆူညံစကား ပြင်းသောအသံချဲ့စက်ဆောင်းဘောက်စ်အသံအဆဲအဆိုနူတ်ကြမ်းတမ်းခြင်းပြုလုပ်နေပါကထိုအိမ်သည် နတ်ဆိုးလှည်းအိမ်ဟုခေါ်သည် ။
အမင်္ဂလာအသံကြားတွင်ညပ်နေ၍ဖြစ်၏ ။မေတ္တသုတ် မပြတ်သရဇ္ဈယ်အပ်၏ ။
အလွန်စပ်စပ်စုစုနိူင်သော အိမ်နီးပါးချင်းငွေအချေးအငှားအလွန်ပက်စက်၍ပြန်ဆပ်လျှင်လက်အလွန်ခက်သောသူတို့နှင့်နေထိုင်ရပါကမရှိပါ ဟူသောစကားကိုလိမ်ညာပြောတတ်ရ၍သီလ မလုံသောကံကို စီရင်ဖန်တီးမိနေတတ်၍အလိမ္မာဖြင့် ဝစီကံထိမ်းထိမ်းသိမ်းသိမ်းသတိထားပြောရတတ်၏။
ဝစီဗေဒထိတိုင်းရှ ဟူသည်နှင့်အညီကိုယ်ပါ ဆင်းရဲနွမ်းပါးလာတတ်၏
ဒီအိမျမကျတှေ မကျတတျရငျသိမျးထားပါ (က) မှ (မ) အထိ
၁။ ကွာမြိုးငါးပါးအနံ့ကို ရှုရသညျဟု မွငျမကျမူ တညျကွညျ့စှာ ဂုဏျသတငျးကြျောစောရအံ့
၂။ ကွာညိုပနျးကို ပနျရသညျဟု မွငျမကျမူု မယားကောငျးရအံ့
၃။ ကွာသှတျအိုးနှငျ့ ရခြေိုးရသညျဟု မွငျမကျမူ သူတဈပါးတို့၏မှီခိုရာ ဖွဈအံ့။ ကွာသှတျအိုးမွငျမကျမူ စညျးစိမျမြားအံ့
၄။ ကွာပနျးစသညျမွငျမကျမူ ဖြားနာအံ့
၅။ ကြှဲစီးရသညျဟု မွငျမကျမူ ကြေးကြှနျရအံ့
၆။ ကြှဲ၊ နှား၊ ဝကျ၊ မွခှေေး၊ လငျးတ တိရစ်ဆာနျတို့ကို မွငျမကျမူ ဥပါဒျရောကျအံ့
၇။ ကြှဲ၊ နှား၊ ဝကျ၊ ဆငျ၊ မွငျးတို့အား ကောငျးသော အခွငျးအရာဖွငျ့ မွငျမကျမူ နတျစိမျးတို့ နှဈသကျအံ့
၈။ ကွှဲခတသြညဟြု မှငမြကမြူ ရှနကြီးစှာ တှရေ့အံ့
၉။ ကြှဲထှကျပွေးသညျဟု မွငျမကျမူ ရနျသူ၊ ကြှနျအမှုလုပျတို့ ပွေးအံ့
၁၀။ ကငျြကွီးစှနျ့သညျဟု မွငျမကျမူ ဥစ်စာလြှောအံ့
၁၁။ ကငျြငယျစှနျ့ရသညျဟု မွငျမကျမူ ဂုဏျသရလြှေောအံ့
၁၂။ ကိုယျပျေါသို့ လောကျတကျသညျဟု မွငျမကျမူ ဥစ်စာရအံ့။ ကြေးကြှနျ၊ ကြှဲ၊ နှားသျော ရအံ့
၁၃။ ကိုယျခန်ဓာပုပျသညျဟု မွငျမကျမူ တနျခိုးကွီးအံ့
၁၄။ ကိုယျမှာ အကွောငျအကွားရှိသညျဟု မွငျမကျမူ မယားကောငျးရအံ့။ ကိုယျအမှေးရှညျသညျကို မကျမူ လာဘျကွီးရအံ့။ ကိုယျယောငျတောကျပသညျဟု မွငျမကျမူ တနျခိုးကွီးအံ့
၁၅။ ကောငျသော အခွငျးအရာဖွငျ့ မွှကေို မွငျမကျမူ ပွိတ်တာ၊ သရဲ၊ သဘကျတို့ ကြေးဇူးပွုအံ့။ ကောငျးသော အခွငျးအရာဖွငျ့ လငျးတကို မွငျမကျမူ ဇျောဂနီနတျခဈြရအံ့
၁၆။ ကောငျးကငျ၌ တညျရှိသော ပွာသာဒျတို့တကျ၍ ကာမဂုဏျခံစားရသညျဟု မွငျမကျမူ အကွီးအမှူးဖွဈရအံ့
၁၇။ ကောငျးကငျပြံတကျ တံခှနျလှားမွငျမကျမူ ထငျရှားရအံ့
၁၈။ ကြောကျဖြာအိမျမိုး မွငျမကျမူ အမြားသခငျဖွဈရအံ့
၁၉။ ကြျောဖြာထကျနရေသညျဟု မွငျမကျမူ အလှနျကောငျးအံ့
၂၀။ ကြောကျဖျြာကို မြိုရသညျဟု မွငျမကျမူ ကြေးဇူးသတငျး ပြံ့နှံ့ခွငျးဖွဈအံ့
၂၁။ ကွကျခငျြးခှပျသညျဟု မွငျမကျမူ တရားတှရေ့အံ့
၂၂။ ကွကျ၊ ငှကျတို့၏ အတောငျမြားကို စားရသညျဟု မွငျမကျမူ ခမျြးသာရအံ့
၂၃။ ကခုနျမွူးတူးရသညျဟု မွငျမကျမူ မကောငျး
၂၄။ ကြားစှယျ၊ မိကြောငျးစှယျကို ရငျခှငျပိုကျရသညျဟု မွငျမကျမူ အမြားတကျ ထူးခြှနျသူ ဖွဈရ၏
၂၅။ ကြားကို မွငျမကျမူ မကောငျး
၂၆။ ကုနျးကိုတကျပွီးမှ ကငျြးသို့ဆငျး၍ ခေါငျးဆေးရသညျဟု မွငျမကျမူ ဘုနျတနျးခိုးကွီးအံ့
၂၇။ ကွှယျဝသောသူကို မွငျမကျမူ ကောငျးကြိုးရောကျအံ့
၂၈။ ကကျြပွီးသား လူသားကိုလညျးကောငျး၊ လူ၏ လကျရုံးသားကိုလညျးကောငျး စားရသညျဟု မွငျမကျမူ ထီပေါကျအံ့
၂၉။ ကှနျးစငျအခေါငျ တကျရသညျဟု မွငျမကျမူ အကွီးအကဲ ဖွဈအံ့
၃၀။ ကှမျးရှကျ၊ သဈရှကျ စားရသညျဟု မွငျမကျမူ ပုဆိုးကောငျး၊ အဝတျကောငျးရအံ့
၁။ ခရုသငျးကို မွငျမကျမူ ဘေးဥပါဒျပြောကျကငျးအံ့
၂။ ခရုသငျးပေးလာသညျကို မွငျမကျမူ အကငျြ့မွတျသူ သန်ဓတေညျအံ့။ ခရုသငျးမှုတျရသညျဟု မွငျမကျမူ စညျးစိမျတိုးအံ့
၃။ ခှေးကိုကျသညျဟု မွငျမကျမူ အမှောငျ့ပယောဂ ကိုယျသို့ကပျအံ့
၄။ ခေါငျးဖွီးသညျဟု မွငျမကျမူ မိဘတို့ အကြျောအစောရှိအံ့။ ဘေးပြောကျအံ့
၅။ ခံတှငျးသို့ မကောငျးသောအနံ့ဝငျသညျဟု မွငျမကျမူ သီခငျြးကကျြမှတျရအံ့။ ခံတှငျးက အနံ့မကောငျးထှကျသညျဟု မွငျမကျမူ ယုတျ
မာသော စကားကို ဆိုရအံ့။ ခံတှငျးက ကောငျးသောအနံ့ ထှကျသညျဟု မွငျမကျမူ ကောငျးသော စကားကို ဆိုရအံ့
၆။ ခံတှငျးသို့ မှေးကွိုငျသော ရနံ့ ဝငျသညျဟု မွငျမကျမူ လောကုတ်တရာ ကမျြးစာကကျြမှတျရအံ့။ ခံတှငျးက အပုပျနံ့ထှကျသညျဟု မွငျမကျမူ ယုတျမာသော စကားကို ဆိုရအံ့
၇။ ခံတှငျးဖွငျ့ လကျနကျကို ယူရသညျ မွငျမကျမူ ခမျြးသာကွှယျဝအံ့
၁၁။ ခှငျြသကေို့ စီးသှားသညြ မှငမြကမြူ စီးသး ကှီးပှားခမြွးသာအံ့။ ခငပြုပငြှကသြံကို ကှားရသညမြှငမြကမြူ အနာဖွားသငြ့အံ့။
၄။ ဂဏာနျးသခြာ င်ျမြား အပေါငျးရသညျ၊ မွှောကျရသညျ မွငျမကျမူ ဝငျငှတေိုးအံ့၊ စိတျခမျြးသာအံ့။
၁။ စငျကွယျသော ကလေးသူငယျကိုလညျးကောငျး၊ မီးရဲရဲကိုလညျးကောငျး၊ ခွသငေ့်ျကိုလညျးကောငျး၊ နနျးပွဿဒျကို လညျးကောငျး၊ န
တျကိုလညျးကောငျး၊ ပုဏ်စားကိုလညျးကောငျး၊ မွငျမကျမူ ခမျြးသာသုခကွီးအံ့။
၂။ ညစာစားရသညကြို မှငမြကမြူ အိမတြှငးရေး အေးအံ့၊ ခစွသြူ ခငသြူ ပေါမွားအံ့။
၄။ နှားမ, ဖမျးရသညျဟု မွငျမကျမူ သူကွီးဖွဈအံ့
၁၀။ နတျဆေး လိမျးကြံမွငျမကျမူ ဥစ်စာရအံ့။
၁၈။ နေ လတို့ကို ဖကျရသညျဟု မွငျမကျမူ ကွှယျဝခမျြးသာအံ့။
၄။ ပနျးနီပနျ၍ ဖနျရညျစှနျးသော အဝတျကို ဝတျရသညျဟု မွငျမကျမူ ဘေးထိတတျအံ့။
၈။ ပွာသာဒျထကျ၌ အစားအစာကို စားရသညျဟု မွငျမကျမူ အထူးကောငျးမှနျအံ့။ ပွာသာဒျထကျမှနေ၍
အရသာအဖြျောကို သောကျရသညျဟု မွငျမကျမူ ခမျြးသာသုခ တဈနတေ့ခွားတိုးအံ့။
၈။ ဖောငျတိနျ လကျဆောငျရသညျ မွငျမကျမူ စာပေ၌ အထူးအောငျမွငျကြျောစောအံ့။
၁၂။ မကျြစိဖှငျ့သညျဟု မွငျမကျမူ ကောငျးကြိုး၊ မကောငျးကြိုးကို မွငျရအံ့
၁၅။ မကျြစိ၌ တိမျသလ်လာကသြညျဟု မွငျမကျမူ အသိဉာဏျနညျးပါးအံ့
အိပ်မက်တိုင်းမှာ အဓိပ္ပါယ်တွေရှိတယ်..အိပ်မက် မက်ပြီးရင် ပြန်ကြည့်ဖို့သိမ်းထားလိုက်ပါ
[ က ] နှင့်ပက်သက်သော အိပ်မက်များ
၁။ ကြာမျိုးငါးပါးအနံ့ကို ရှုရသည်ဟု မြင်မက်မူ တည်ကြည့်စွာ ဂုဏ်သတင်းကျော်စောရအံ့
၂။ ကြာညိုပန်းကို ပန်ရသည်ဟု မြင်မက်မူု မယားကောင်းရအံ့
၃။ ကြာသွတ်အိုးနှင့် ရေချိုးရသည်ဟု မြင်မက်မူ သူတစ်ပါးတို့၏မှီခိုရာ ဖြစ်အံ့။ ကြာသွတ်အိုးမြင်မက်မူ စည်းစိမ်များအံ့
၄။ ကြာပန်းစသည်မြင်မက်မူ ဖျားနာအံ့
၅။ ကျွဲစီးရသည်ဟု မြင်မက်မူ ကျေးကျွန်ရအံ့
၆။ ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်၊ မြေခွေး၊ လင်းတ တိရစ္ဆာန်တို့ကို မြင်မက်မူ ဥပါဒ်ရောက်အံ့
၇။ ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်၊ ဆင်၊ မြင်းတို့အား ကောင်းသော အခြင်းအရာဖြင့် မြင်မက်မူ နတ်စိမ်းတို့ နှစ်သက်အံ့
၈။ ကြှဲခတျသညျဟု မွငျမကျမူ ရွနျကီးစှာ တှေ့ရအံ့
၉။ ကျွဲထွက်ပြေးသည်ဟု မြင်မက်မူ ရန်သူ၊ ကျွန်အမှုလုပ်တို့ ပြေးအံ့
၁၀။ ကျင်ကြီးစွန့်သည်ဟု မြင်မက်မူ ဥစ္စာလျှောအံ့
၁၁။ ကျင်ငယ်စွန့်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ ဂုဏ်သရေလျှောအံ့
၁၂။ ကိုယ်ပေါ်သို့ လောက်တက်သည်ဟု မြင်မက်မူ ဥစ္စာရအံ့။ ကျေးကျွန်၊ ကျွဲ၊ နွားသော် ရအံ့
၁၃။ ကိုယ်ခန္ဓာပုပ်သည်ဟု မြင်မက်မူ တန်ခိုးကြီးအံ့
၁၄။ ကိုယ်မှာ အကြောင်အကြားရှိသည်ဟု မြင်မက်မူ မယားကောင်းရအံ့။ ကိုယ်အမွေးရှည်သည်ကို မက်မူ လာဘ်ကြီးရအံ့။ ကိုယ်ယောင်တောက်ပသည်ဟု မြင်မက်မူ တန်ခိုးကြီးအံ့
၁၅။ ကောင်သော အခြင်းအရာဖြင့် မြွေကို မြင်မက်မူ ပြိတ္တာ၊ သရဲ၊ သဘက်တို့ ကျေးဇူးပြုအံ့။ ကောင်းသော အခြင်းအရာဖြင့် လင်းတကို မြင်မက်မူ ဇော်ဂနီနတ်ချစ်ရအံ့
၁၆။ ကောင်းကင်၌ တည်ရှိသော ပြာသာဒ်တို့တက်၍ ကာမဂုဏ်ခံစားရသည်ဟု မြင်မက်မူ အကြီးအမှူးဖြစ်ရအံ့
၁၇။ ကောင်းကင်ပျံတက် တံခွန်လွှားမြင်မက်မူ ထင်ရှားရအံ့
၁၈။ ကျောက်ဖျာအိမ်မိုး မြင်မက်မူ အများသခင်ဖြစ်ရအံ့
၁၉။ ကျော်ဖျာထက်နေရသည်ဟု မြင်မက်မူ အလွန်ကောင်းအံ့
၂၀။ ကျောက်ဖျာ်ကို မျိုရသည်ဟု မြင်မက်မူ ကျေးဇူးသတင်း ပျံ့နှံ့ခြင်းဖြစ်အံ့
၂၁။ ကြက်ချင်းခွပ်သည်ဟု မြင်မက်မူ တရားတွေ့ရအံ့
၂၂။ ကြက်၊ ငှက်တို့၏ အတောင်များကို စားရသည်ဟု မြင်မက်မူ ချမ်းသာရအံ့
၂၃။ ကခုန်မြူးတူးရသည်ဟု မြင်မက်မူ မကောင်း
၂၄။ ကျားစွယ်၊ မိကျောင်းစွယ်ကို ရင်ခွင်ပိုက်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ အများတက် ထူးချွန်သူ ဖြစ်ရ၏
၂၅။ ကျားကို မြင်မက်မူ မကောင်း
၂၆။ ကုန်းကိုတက်ပြီးမှ ကျင်းသို့ဆင်း၍ ခေါင်းဆေးရသည်ဟု မြင်မက်မူ ဘုန်တန်းခိုးကြီးအံ့
၂၇။ ကြွယ်ဝသောသူကို မြင်မက်မူ ကောင်းကျိုးရောက်အံ့
၂၈။ ကျက်ပြီးသား လူသားကိုလည်းကောင်း၊ လူ၏ လက်ရုံးသားကိုလည်းကောင်း စားရသည်ဟု မြင်မက်မူ ထီပေါက်အံ့
၂၉။ ကွန်းစင်အခေါင် တက်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ အကြီးအကဲ ဖြစ်အံ့
၃၀။ ကွမ်းရွက်၊ သစ်ရွက် စားရသည်ဟု မြင်မက်မူ ပုဆိုးကောင်း၊ အဝတ်ကောင်းရအံ့
[ ခ ] နှင့် ပက်သက်သော အိပ်မက်များ
၁။ ခရုသင်းကို မြင်မက်မူ ဘေးဥပါဒ်ပျောက်ကင်းအံ့
၂။ ခရုသင်းပေးလာသည်ကို မြင်မက်မူ အကျင့်မြတ်သူ သန္ဓေတည်အံ့။ ခရုသင်းမှုတ်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ စည်းစိမ်တိုးအံ့
၃။ ခွေးကိုက်သည်ဟု မြင်မက်မူ အမှောင့်ပယောဂ ကိုယ်သို့ကပ်အံ့
၄။ ခေါင်းဖြီးသည်ဟု မြင်မက်မူ မိဘတို့ အကျော်အစောရှိအံ့။ ဘေးပျောက်အံ့
၅။ ခံတွင်းသို့ မကောင်းသောအနံ့ဝင်သည်ဟု မြင်မက်မူ သီချင်းကျက်မှတ်ရအံ့။ ခံတွင်းက အနံ့မကောင်းထွက်သည်ဟု မြင်မက်မူ ယုတ်
မာသော စကားကို ဆိုရအံ့။ ခံတွင်းက ကောင်းသောအနံ့ ထွက်သည်ဟု မြင်မက်မူ ကောင်းသော စကားကို ဆိုရအံ့
၆။ ခံတွင်းသို့ မွှေးကြိုင်သော ရနံ့ ဝင်သည်ဟု မြင်မက်မူ လောကုတ္တရာ ကျမ်းစာကျက်မှတ်ရအံ့။ ခံတွင်းက အပုပ်နံ့ထွက်သည်ဟု မြင်မက်မူ ယုတ်မာသော စကားကို ဆိုရအံ့
၇။ ခံတွင်းဖြင့် လက်နက်ကို ယူရသည် မြင်မက်မူ ချမ်းသာကြွယ်ဝအံ့
၉။ ခြေသည်းလက်သည်းတို့ကို လှီးရသည်ဟု မြင်မက်မူ အကြီးအကဲ ဖြစ်အံ့။ အထက်လူကြီးများ ချစ်ခင်အံ့။
၁၁။ ခွင်ျသေ့ကို စီးသှားသညျ မွငျမကျမူ စီးသး ကွီးပှားခမျြးသာအံ့။ ခငျပုပျငှကျသံကို ကွားရသညျမွငျမကျမူ အနာဖြားသငျ့အံ့။
၁၃။ ခိုးသူတို့ အရပ်လေးမျက်နှာမှ လာသည်ကို ဖမ်းမိသည်ဟု မြင်မက်မူ ချမ်းသာအံ့။
၁၄။ ချွေးထွက်၊ သွေးထွက်သည်ကို မြင်မက်မူ ဘနုးကြီးအံ့။
၁၈။ ခုံညင်းကစားရသည်ဟု မြင်မက်မူ အကြီးအကဲ ဖြစ်အံ့။
၂၀။ ခင်ပုပ်ငှက်မြည်သံကို ကြားရသည် မြင်မက်မူ အနာကြီး သင့်ရာ၏။
[ ဂ ] နှင့်ပက်သက်သော အိပ်မက်များ
၁။ ဂူလိုဏ်ကိုလည်းကောင်း၊ တံတိုင်းကိုလည်းကောင်း ပြုလုပ်ရသည် မြင်မက်မူ ချမ်းသာသုခကိုရ၍ ဘေးရန်မရှိတည်မြဲအံ့။
၂။ ဂူ(သင်္ချိုင်း)ကို မြင်မက်မူ အမွေရအံ့၊ ထီပေါက်အံ့။
၃။ ဂျုံစားရသည်ကို မြင်မက်မူ လုံခြုံအံ့၊ အသက်ရှည်အံ့။
၄။ ဂဏာန်းသချာ င်္များ အပေါင်းရသည်၊ မြှောက်ရသည် မြင်မက်မူ ဝင်ငွေတိုးအံ့၊ စိတ်ချမ်းသာအံ့။
၅။ ဂမုန်းပင်ကို မြင်မက်မူ အကြီးအကျယ်စီးပွားဖြစ်အံ့။( စီးပွားဂမုန်း) မီးကွင်းဂမုန်းဖြစ်လျှင် ပူပင်သောက ကင်းဝေးအံ့။
၆။ ဂုန်လျှော်ပင်များ စိုက်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ သာယာသော အိမ်ထောင်ရေး ဖန်တီးရအံ့။
၈။ ဂေါက်သီးကစားရသည်ကို မြင်မက်မူ လိုအင်ဆန္ဒပြည့်စုံအံ့။
၉။ ဂျုံခင်းထဲ၌ သွားရသည်မြင်မက်မူ မြင့်မြတ်သော သူနှင့် လက်ထပ်ရအံ့၊ ချမ်းသာရန် နီးကပ်အံ့။
[ င ] နှင့်ပက်သက်သော အိပ်မက်များ
၂။ ငှက်ပျောပင်းကို စိုက်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ ရာထူးကြီးရအံ့။
[ စ ] နှင့် ပက်သက်သော အိပ်မက်များ
၁။ စင်ကြယ်သော ကလေးသူငယ်ကိုလည်းကောင်း၊ မီးရဲရဲကိုလည်းကောင်း၊ ခြသေ့င်္ကိုလည်းကောင်း၊ နန်းပြဿဒ်ကို လည်းကောင်း၊ န
တ်ကိုလည်းကောင်း၊ ပုဏ္စားကိုလည်းကောင်း၊ မြင်မက်မူ ချမ်းသာသုခကြီးအံ့။
၆။ စစ်သည်အများ လာသည်ကို မြင်မက်မူ အနာရောဂါ ဖြစ်အံ့။ စစ်ဗိုလ်ပါကို မြင်မက်မူ ချမ်းသာသုခတိုးအံ့။
၈။ စားကြူးရသည်ဟု မြင်မက်မူ ဥစ္စာရွှေငွေလျော့အံ့၊ ဖျားနာအံ့၊ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမြင်မက်မူ ဆိုလေရာကောင်းအံ့။
[ ဆ ] နှင့်ပက်သက်သော အိပ်မက်များ
၆။ ဆင်ဖြူစီး၍ကောင်းကင်သို့တက်ရာ နေလနှစ်ပါးကျလာ၍ ခြေဖဝါးအပြင်ကပ်လျက်တည်သည်ဟု မြင်မက်မူ တန်ခိုးကြီးအံ့။
၈။ ဆံပင်ရှည်ကိုမြင်မက်မူ အကျင့်ကောင်း၍ အကြီးအကဲ ဖြစ်အံ့။
၁၂။ ဆင်းတုရုပ်ပွား တရားဟောသည်ကို ကြားရမက်မူ ကျော်စောအံ့။ ဆိတ်ဆိတ်နေသည်ကို မြင်မက်မူ သေအံ့။
[ ဇ ] နှင့် ပက်သက်သော အိပ်မက်များ
၂။ ဇာကနာနှင့် အသုံးပြုသည် မြင်မက်မူ အဆွေခင်ပွန်းကောင်းရအံ့။
၄။ ဇီးကွက်ကို နေ့အခါမြင်မက်မူ လာဘ်ကြီးရအံ့၊ ပျော်ရွှင်ရအ့။
၅။ ဇီးကွက်အော်သံကြားရသည် မြင်မက်မူ အတင်းပြောသူတို့ တိတ်ဆိတ်အံ့၊ ကောင်းမွန်သော နည်းလမ်းများ ရအံ့၊ အလုပ်အကိုင်ကြံပေးသူများပေါအံ့။
၇။ ဇောဂျီကို မြင်မက်မူ ကျမ်းမာအံ့၊ ဆေးကောင်းတွေ့အံ့၊ ထင်ပေါ်ကျော်စောအံ့။
[ ဈ ] နှင့်ပက်သက်သော အိပ်မက်များ
၅။ ဈာန်ပျံရသည့်လူများကို မြင်မက်မူ အကြီးအကဲဖြစ်အံ့၊ အောင်မြင်အံ့။
၆။ ဈာန်ရသော ဘုန်းတော်ကြီးကို မြင်မက်မူ အထူကဲကောင်းအံ့၊ မျက်နှာပွင့်အံ့။
၇။ ဈာန်ပျံရထား စီးရသည် မြင်မက်မူ အကြီးအကဲဖြစ်အံ့၊ ထင်ပေါ် ကျော်စောအံ့။
[ ည ] နှင့်ပက်သက်သော အိပ်မက်များ
၁။ ညမှောင်ပြီး အလင်းရောင်ပေါ်သည် မြင်မက်မူ ကံကောင်းချိန်ရောက်ပြီဟု မှတ်ယူပါ။
၂။ ညစာစားရသညျကို မွငျမကျမူ အိမျတှငးရေး အေးအံ့၊ ခဈြသူ ခငျသူ ပေါမြားအံ့။
၃။ ညဥ့်ငှက်သံ သာယာစွာ ကြားရသည် မက်မူ ချမ်းသာ သုခ ဖြစ်အံ့၊ မိမိလိုမင်အန္ဒပြည့်အံ့။
၄။ ညီညာစွာ စွမ်းဆောင်ရသည်မြင်မက်မူ အထင်ကြီးခြင်းခံရအံ့၊ ပူဇော်ခံရအံ့။
၈။ ညောင်ရွက်ကို မြင်မက်မူ သူတော်ကောင်းများက စောင့်ရှောက်အံ့၊ အလွန်ကံကောင်းအံ့။
၉။ ညောင်ရွက်အိမ် ဦးခန်းကျသည်ကို မြင်မက်မူ ရွှေဆင်းတုတော်ရရှိအံ့၊ ဘုရားကိုးဆူပင့်ရအံ့
[ တ ] နှင့် ပက်သက်သော အိပ်မက်များ
၁။ တောင်ပို့တက် ခေါင်းဖြီးရသည်ဟု မြင်မက်မူ သူတစ်ပါး တို့၏ ကိုးကွယ်ရာဖြစ်အံ့။
၂။ တောင်ထိပ်၌ နေရသည်ဟု မြင်မက်မူ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း အကြီးအကဲ ဖြစ်အံ့။
၄။ တောင်ကလပ်တက်နေသည်ဟု မြင်မက်မူ လက်ရှိ ရာထူးထက် မြင့်သောအဆင့်ကို ရအံ့။
၆။ တံခွန်လှူရသည်ဟု မြင်မက်မူ ထင်ရှားအံ့။
၈။ တံတားပေါ်လျှောက်ရသည်ဟူ မြင်မက်မူ သောက ရှိလျက် အလိုပြည့်အံ့။
၁၀။ တန်ဆောင်းညိုဟု မြင်မက်မူ စာတတ်အံ့၊ ထင်ရှားအံ့။
[ ထ ] နှင့် ပက်သက်သော အိပ်မက်များ
၂။ ထောပတ်၊ နို့ စသည်တို့ကို ရွံရှာဖွယ်မြင်မက်မူ ဘီလူးဘေး၊ ငတ်မွတ်ဘေူး၊ နာဖျားသောဘေး တွေ့အံ့။
၃။ ထမ်းစင် သံလျှင်စီးရသည် မြင်မက်မူ လာဘ်ရအံ့။
၅။ ထမင်းစားရသည်ဟု မြင်မက်မူ လာဘ်ရအံ့၊ ကြောင့်ကြရအံ့။
၆။ ထမင်းနှင့်တကွ သပိတ်လွယ်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ လာဘ်ရအံ့။
၈။ ထိတ်လန့်သည်ဟု မြင်မက်မူ မကောင်း။
၉။ ထင်းပုံပြိုကျသည်ဟု မြင်မက်မူ မကောင်း။
[ ဒ ] နှင့် ပက်သက်သော အိပ်မက်များ
၂။ ဒါနပြုရသည်ဟု မြင်မကမူ ရာထူးတိုးအံ့၊ စန်းပွင့်အံ့၊ စကားကောင်းပြောအံ့။
၃။ ဒုံးလှေကို မြင်မက်မူ စိတ်ပျော်ရွှင်အံ့။
၄။ ဒေလီယာပန်းပွင့်ကြီးကို မြင်မက်မူ အခြွေအရံ အသင်းအပင်းများပေါများအံ့။
၅။ ဒေလီယာပန်းကြီး ပန်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ မုချလက်ထပ်ရအံ့။ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ပျော်ရအံ့။
[ ဓ ]နှင့် ပက်သက်သော အိပ်မက်များ
၂။ ဓာတ်လုံးနှင့် ပေါက်ရသည်၊ ပစ်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ ရန်သူအပေါင်းကို အလွယ်တကူ နိုင်အံ့။
[ န ]နှင့် ပက်သက်သော အိပ်မက်များ
၁။ နို့အမျိုးမျိုးကို သောက်သည်ဟု မြင်မက်မူ သူတစ်ပါး ပညာပေးအံ့။
၂။ နို့ညှစ်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ ကြွယ်ဝအံ့။
၃။ နို့ကို ရွှေခွက်နှင့် ထည့်၍ သောက်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ လာဘ်ရအံ့။ နွားနို့သောက်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ သူတစ်ပါးတို့ထက် ကျော်စောအံ့။
၄။ နွားမ, ဖမ်းရသည်ဟု မြင်မက်မူ သူကြီးဖြစ်အံ့
၉။ နတ်ရုပ်၊ ဗိဿနိုးရုပ်ကို မြင်မက်မူ အဆွေခင်ပွန်းကောင်းရအံ့။
၁၀။ နတ်ဆေး လိမ်းကျံမြင်မက်မူ ဥစ္စာရအံ့။
၁၂။ နေဗိမာန်သည် ကြယ်အပေါင်းခြံရံချက် မြေမှ ကောင်းကင်သို့ ပျံတက်သည်ဟု မြင်မက်မူ ဘုန်းကံသေးငယ်သူတို့ အတုမရှိ ဘုန်းကြီးအံ့။
၁၄။ နေ လတို့ မွန်းတည့်သည်ဟု မြင်မက်မူ ကြီးစွာသော ချမ်းသာသုခကို ရအံ့။ အမျိုး(၇)ဆက်တိုင် မပျက်နိုင်သော စည်းစိမ်ကို ရအံ့။
၁၅။ နေ လတို့ကို ရင်ခွင်ပိုက်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ ဘုန်းကြီးသော သားကို ရအံ့။ နေအိမ်၊ လအိမ်ဖွဲ့၍ ဝမ်းတွင်းဝင်သည်ဟု မြင်မက်မူ ကောင်းစားအံ့။
၁၆။ နေ လ ကြယ်တို့ကို မြင်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ သူတစ်ပါးတို့ထက် မြင့်မားသော ရာထူးရှိသူ ဖြစ်အံ့။
၁၇။ နေသည် အရှေ့က ထွက်၍ အနောက်သို့ ဝင်သည်ဟု မြင်မက်မူ ကမ္ဘာတွင် ထင်ရှားသော ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ပေါက်အံ့။
၁၈။ နေ လတို့ကို ဖက်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ ကြွယ်ဝချမ်းသာအံ့။
၂၃။ နားတွင်းသို့ ဆီသန့်သန့်ဝင်သည်ဟု မြင်မက်မူ နှစ်သက်ဖွယ်ရာ စကားကို ကြားရအံ့။
၂၆။ နှာခေါင်းပဲ့သည်ဟု မြင်မက်မူ စီးပွားဥစ္စာလျှောအံ့။
၂၇။ နှာခေါင်းတွင်းသို့ မကောင်းသော အနံ့ဝင်သည်ဟု မြင်မက်မူ မကောင်းသော အကြံကို ကြံရအံ့။
၂၈။ နှာခေါင်းတွင်းသို့ ကောင်းသော အနံ့ဝင်သည်ဟု မြင်မက်မူ ကောင်းသော အကြံကို ကြံရအံ့။
၂၉။ နှလုံးသား အပြင်ထွက်သည်ဟု မြင်မက်မူ သားသမီး အရပ်တပါးသို့ ပြောင်းအံ့။
၃၄။ နံ့သာမျိုးငါးပါး တစ်ပါးပါးကို နမ်းရှုရသည်ဟု မြင်မက်မူ တစ်နေ့တခြား ဂုဏ်သတင်းထွက်အံ့။
[ ပ ]နှင့် ပက်သက်သော အိပ်မက်များ
၁။ ပန်းအမျိုးမျိုးတွင် မိမိကြိုက်နှစ်သက်သော ပန်း၏အနံ့ကို နမ်းရှူရသည်ဟု မြင်မက်မူ ကျက်သရေ ဂုဏ်သတင်း ပျံ့နှံ့အံ့။
၄။ ပန်းနီပန်၍ ဖန်ရည်စွန်းသော အဝတ်ကို ဝတ်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ ဘေးထိတတ်အံ့။
၈။ ပြာသာဒ်ထက်၌ အစားအစာကို စားရသည်ဟု မြင်မက်မူ အထူးကောင်းမွန်အံ့။ ပြာသာဒ်ထက်မှနေ၍
အရသာအဖျော်ကို သောက်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ ချမ်းသာသုခ တစ်နေ့တခြားတိုးအံ့။
၁၁။ ပုဆိုးအသစ်၊ လုံချည်သစ်ကို မြင်မက်မူ ဘုန်းကျက်သရေ တိုးအံ့။
၁၆။ ပုပ်စော ဆီ၊ ရေတို့ နားတွင်းသို့ ဝင်သည်ဟု မြင်မက်မူ ဒုစရိုက်နှင့်စပ်သော မနှစ်သက်ဖွယ်ကို ကြားရအံ့။
၁၇။ ပျားရည်သောက်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ ကြံသမျှ ပြီးစီး၍ လာဘ်ရအံ့။
၁၈။ ပျားတုတ်ခံရသည်ဟု မြင်မက်မူ ရန်တွေ့အံ့။
၂၂။ ပိတုန်းတုပ်သည်ဟု မြင်မက်မူ ရန်တွေ့အံ့။
၂၃။ ပါးစပ်ပဲ့သည်ဟု မြင်မက်မူ အလိုရှိသောစကားကို မပြောနိုင်ဘဲ ဆွံ့အနေအံ့။
[ ဖ ]နှင့် ပက်သက်သော အိပ်မက်များ
၂။ ဖွဲမီးတငွေ့ငွေ့ကို မြင်မက်မူ အလွန်ပူအံ့။
၃။ ဖိနပ်စီးရသည်ဟု မြင်မက်မူ အသရေတိုးအံ့။
၈။ ဖောင်တိန် လက်ဆောင်ရသည် မြင်မက်မူ စာပေ၌ အထူးအောင်မြင်ကျော်စောအံ့။
၁၀။ ဖန်ခွက်ရေအပြည့်နှင့်မြင်မက်မူ မင်္ဂလာပွဲများ ခင်းကျင်းရအံ့။
[ ဗ ]နှင့် ပက်သက်သော အိပ်မက်များ
၂။ ဗေဒင်ဟောသည် မြင်မက်မူ လိုအပ်သော အကူအညီများပေးစွမ်းနိုင်သူ ပေါ်အံ့။
၃။ ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ကို မြင်မက်မူ ရာထူးတိုးအံ့။ သားကောင်းရတနာရအံ့။
[ ဘ ]နှင့် ပက်သက်သော အိပ်မက်များ
၁။ ဘုရားရုပ်ထုတော် မိမိဦးခေါင်း၌ တည်ရှိသည်ဟု မြင်မက်မူ အကြီးအကဲတို့ ချီးမြှောက်အံ့။
၂။ ဘုရားရုပ်ထုတော် မိမိလက်ဝဲ၊ လက်ယာ ပခုံးတို့၌ တည်ရှိသည်ကို မြင်မက်မူ ကြီးမြင့်သော အခြွေအရံ ပရိသတ်ရအံ့။
၃။ ဘုရားရုပ်တုတော် မိမိခြေရင်း၌ တည်ရှိသည်ဟု မြင်မက်မူ ရှိပြီး အကြီးအကဲသည် ရာထူးသက်လျှော၍ မိမိသည်ပင် အကြီးအကဲဖြစ်အံ့။
၄။ ဘုရားရုပ်တုတော် ကြွသွားတော်မူသည်ဟု မြင်မက်မူ ဘုန်းကျက်သရေတိုးအံ့။
၅။ ဘုရားရုပ်ပွားတော် ဖူးတွေ့ရသည်ဟု မြင်မက်မူ တစ်နေ့တခြား ကျော်စောအံ့။
၆။ ဘုရားရုပ်တုတော်၊ စေတီတော်၊ ပုထိုးတော်တို့ကို မြင်မက်မူ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တို့ ချစ်အံ့။
၇။ ဘုရားရုပ်တုတော် မကောင်းသော အခြင်းအရာဖြင့်ကြွသွားသည်ကို မြင်မက်မူ ဘုန်းကျက်သရေ ဆုတ်ယုတ်အံ့။
၈။ ဘုရားရုပ်ပွား၊ စေတီ၊ ပုထိုးကို မကောင်းသော အခြင်းအရာအားဖြင့် မြင်မက်မူ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တို့ မချစ်ခင်သဖြင့် ဥပါဒ်ရောက်အံ့။
၉။ ဘုရားရုပ်ပွားတော်၊ ဆင်းတုတော် တရားဟောသည်ကို မြင်မက်မူ ကျော်စောအံ့။
၁၀။ ဘုရားရုပ်ပွားတော်၊ ဆင်းတုတော် တရားဟောသည်၊ စကားပြောသည်ကို ကြားရသည်ဟု မြင်မက်မူ ကျော်စောအံ့။
၁၂။ ဘုရားရုပ်တုတော်ကို ဖက်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ ကျက်သရေတိုးအံ့။
[ မ ]နှင့် ပက်သက်သော အိပ်မက်များ
၁။ မိမိရူးသည်ဟု မြင်မက်မူ လာဘ်ရအံ့။
၂။ မိမိအူကို ထုတ်၍ ပတ်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ သြဇာအာဏာ အရှိအဝါကြီးမားအံ့။
၄။ မိကျောင်းစီးရသည် မြင်မက်မူ ရန်သူကို နိုင်အံ့။
၆။ မိကျောင်းသား စားရသည်ဟု မြင်မက်မူ လာဘ်ကြီးအံ့။
၈။ မိန်းမနှင့် အတူ အိပ်ရသည်ဟု မြင်မက်မူ လာဘ်ရအံ့။
၁၀။ မိန်းမအမွေးအမျှင်ရှည်သည်ကို မြင်မက်မူ ချမ်းသာအံ့။
၁၂။ မျက်စိဖွင့်သည်ဟု မြင်မက်မူ ကောင်းကျိုး၊ မကောင်းကျိုးကို မြင်ရအံ့
၁၄။ မျက်စိ၌ အမှိုက်ဝင်သည်ဟု မြင်မက်မူ အနိဠာရုံကို ရအံ့။
၁၅။ မျက်စိ၌ တိမ်သလ္လာကျသည်ဟု မြင်မက်မူ အသိဉာဏ်နည်းပါးအံ့
နိုငျငံသားအဖွဈခံ ယူသူတိုငျးကို နထေိုငျဖို့ အိမျတှေ အလကားပေးဝတေဲ့ နိုငျငံ ၅ နိုငျငံရှိတယျလို့ ပွောရငျ သငျအံအားသငျသှားမှာပါ။အဲဒီ နိုငျငံတှဟော ဘယျနျုငျငံတှလေဲဆိုတော့
Gangiမှာရှိတဲ့ Sicilian မွို့ကိုခငျဗြားတို့ကွားဖူးကွလား။ အီတလီမှာရှိတဲ့ အဲ့ဒီမွို့လေးမှာ လူပေါငျး ရဝဝ၀ လောကျနထေိုငျနကွေပွီးတော့ လှနျခဲ့တဲ့ ဆယျစုနဈလောကျထဲက အိမျပိုငျမရှိတဲ့ မိသားစုဆိုတာလုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူးတဲ့။
သငျသာအီတလီနိုငျငံသားအဖွဈခံယူပွီး အဲ့ဒီနိုငျငံမှာပဲ တဈသကျလုံးနသှေားမယျဆိုတာ သခြောရငျတော့ ဒီနိငျငံကသငျ့ကိုနထေိုငျဖို့တှကျ အိမျယာကောငျးတဈလုံးအလကါးပေးဝသှေားမှာအမှနျပါပဲနျော။ ကွားရတာ တျောတျောလနျးတယျနေျာ့။
အမရေိကနျနိုငျငံ ရဲ့အနောကျအလယျပိုငျးပွညျနယျတှဖွေဈတဲ့ Gary, Indiana, နဲ့ Detroit လိုမွို့တှမှော အိမျရာမဲ့တှမေတိုးပှားအောငျလို့ အမှနျတကယျကိုလုပျဆောငျနကွေပါတယျနျော။ သူတို့တှကေ နိုငျငံသားဖွဈကွောငျးမှတျပုံတငျနဲ
့အလုပျရှိပွီး ပုံမှနျဝငျငှရှေိသူတိုငျး ၊ အမရေိကနျပွညျသူအဖွဈခံယူထားတဲ့ နိုငျငံသားတိုငျးကို နထေိုငျဖို့ အိမျတဈလုံးစီအမှနျတကယျပေးနပေါတယျနျော ။
ဒီနိုငျငံကတော့ အမရေိကနျနဲ့ အီတလီနိုငျငံတို့လိုမြိုး နထေိုငျဖို့အိမျပေးတာခွငျးတော့မတူဖူး ။ တောငျအာဖရိကနိငျငံက သူတို့နိုငျငံသားတှထေဲက ဆငျးရဲတဲ့သူမှနျသမြှကို အိမျတဈလုံးစီနထေိုငျဖို့ပေးပါတယျနျော ။
တောငျအာဖရိကနိုငျငံကတော့ ဝငျငှလေစာအနညျးဆုံးဆိုတဲ့ နိုငျငံသားတှအေပျေါကို ပိုဦးစားပေးပွီးတော့ နထေိုငျဖို့အိမျပေးတဲ့ နညျးလမျးကိုဦးဆောငျကငျြ့သုံးပါတယျ။
သငျ ဒီကြှနျးစုနိုငျငံကိုသိပါသလား။ သငျတယောကျတညျး သငျရွဲ့အလုပျစားပှဲပျေါမှာ ပဲအခြိနျကုနျမနပေါနဲ့တော့။ဒီကြှနျးစုနိုငျငံလေးမှာ တကယျ့ကိုနထေိုငျဖို့အတှကျ အခှငျ့အလမျးတှအေမြားကွီးရှိနတောပါနျော ။ လူဦးရလေညျးအမြားကွီးမရှိပဲ
မိသားစုစုပေါငျး ၅ဝခနျ့သာရှိတဲ့ ဒီကြှနျးစုလေးမှာတော့ ဗွိတိနျကိုလိုနီတှကေ ယခုအခါမှာတော့ နထေိုငျဖို့အိမျခွယောခွအေပွညျ့အဝခံစားခှငျ့တှပေေးထားပါတယျနျော ။
လှပလှနျတဲ့ရူခငျးတှပေေါတဲ့ တောငျအမရေိကမှာရှိတဲ့ … Colombia နိုငျငံကတော့ တောငျအာဖရိကနဲ့ အိမျခွပေေးဝပေုံခွငျးဆငျတူပါတယျ ဝငျငှအေနဲအမြားရှိတဲ့ မိသားစုအလိုကျ အိမျခွပေေးဝတောပါ။ တခွားနိုငျငံတှနေဲ့ယှဉျရငျတော့ ဒီနိုငျငံဟာဆငျးရဲနတေုနျးပါပဲ။ ဒါပမေယျ့လညျး
လှနျခဲ့တဲ့နဈအနညျးငယျလောကျက ပွညျပနိုငျငံတှရေဲ့တှနျးအားပေးကူညီခဲ့မူတှကွေောငျ့ဘဲ စီးပှားရေးတိုးတကျလာခဲ့ပွီး ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျတှေ တျောတျောမြားမြား ရောကျနငျ့နပွေီးဖွဈတဲ့ နိုငျငံအဖွဈရပျတညျနပေါပွီနျော။Ref: Womens Articles
နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံ ယူသူတိုင်းကို နေထိုင်ဖို့ အိမ်တွေ အလကားပေးဝေတဲ့ နိုင်ငံ ၅ နိုင်ငံရှိတယ်လို့ ပြောရင် သင်အံအားသင်သွားမှာပါ။အဲဒီ နိုင်ငံတွေဟာ ဘယ်န်ုင်ငံတွေလဲဆိုတော့
Gangiမှာရှိတဲ့ Sicilian မြို့ကိုခင်ဗျားတို့ကြားဖူးကြလား။ အီတလီမှာရှိတဲ့ အဲ့ဒီမြို့လေးမှာ လူပေါင်း ရဝဝ၀ လောက်နေထိုင်နေကြပြီးတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနစ်လောက်ထဲက အိမ်ပိုင်မရှိတဲ့ မိသားစုဆိုတာလုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူးတဲ့။
သင်သာအီတလီနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူပြီး အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာပဲ တစ်သက်လုံးနေသွားမယ်ဆိုတာ သေချာရင်တော့ ဒီနိင်ငံကသင့်ကိုနေထိုင်ဖို့တွက် အိမ်ယာကောင်းတစ်လုံးအလကါးပေးဝေသွားမှာအမှန်ပါပဲနော်။ ကြားရတာ တော်တော်လန်းတယ်နော့်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ ရဲ့အနောက်အလယ်ပိုင်းပြည်နယ်တွေဖြစ်တဲ့ Gary, Indiana, နဲ့ Detroit လိုမြို့တွေမှာ အိမ်ရာမဲ့တွေမတိုးပွားအောင်လို့ အမှန်တကယ်ကိုလုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်နော်။ သူတို့တွေက နိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်းမှတ်ပုံတင်နဲ
့အလုပ်ရှိပြီး ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိသူတိုင်း ၊ အမေရိကန်ပြည်သူအဖြစ်ခံယူထားတဲ့ နိုင်ငံသားတိုင်းကို နေထိုင်ဖို့ အိမ်တစ်လုံးစီအမှန်တကယ်ပေးနေပါတယ်နော် ။
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံကတော့ ဝင်ငွေလစာအနည်းဆုံးဆိုတဲ့ နိုင်ငံသားတွေအပေါ်ကို ပိုဦးစားပေးပြီးတော့ နေထိုင်ဖို့အိမ်ပေးတဲ့ နည်းလမ်းကိုဦးဆောင်ကျင့်သုံးပါတယ်။
သင် ဒီကျွန်းစုနိုင်ငံကိုသိပါသလား။ သင်တယောက်တည်း သင်ရြဲ့အလုပ်စားပွဲပေါ်မှာ ပဲအချိန်ကုန်မနေပါနဲ့တော့။ဒီကျွန်းစုနိုင်ငံလေးမှာ တကယ့်ကိုနေထိုင်ဖို့အတွက် အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိနေတာပါနော် ။ လူဦးရေလည်းအများကြီးမရှိပဲ
မိသားစုစုပေါင်း ၅ဝခန့်သာရှိတဲ့ ဒီကျွန်းစုလေးမှာတော့ ဗြိတိန်ကိုလိုနီတွေက ယခုအခါမှာတော့ နေထိုင်ဖို့အိမ်ခြေယာခြေအပြည့်အဝခံစားခွင့်တွေပေးထားပါတယ်နော် ။
လှပလွန်တဲ့ရူခင်းတွေပေါတဲ့ တောင်အမေရိကမှာရှိတဲ့ … Colombia နိုင်ငံကတော့ တောင်အာဖရိကနဲ့ အိမ်ခြေပေးဝေပုံခြင်းဆင်တူပါတယ် ဝင်ငွေအနဲအများရှိတဲ့ မိသားစုအလိုက် အိမ်ခြေပေးဝေတာပါ။ တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ယှဉ်ရင်တော့ ဒီနိုင်ငံဟာဆင်းရဲနေတုန်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း
လွန်ခဲ့တဲ့နစ်အနည်းငယ်လောက်က ပြည်ပနိုင်ငံတွေရဲ့တွန်းအားပေးကူညီခဲ့မူတွေကြောင့်ဘဲ စီးပွားရေးတိုးတက်လာခဲ့ပြီး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေ တော်တော်များများ ရောက်နင့်နေပြီးဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံအဖြစ်ရပ်တည်နေပါပြီနော်။Ref: Womens Articles